लेखक: जोसे क्विनोनेज
मेक्सिकन समुदायको लागि सुरक्षित, विश्वसनीय "वित्तीय सशक्तीकरण विन्डोज" यी कठिन समयहरूमा एक उज्यालो हो
José Quiñonez मा फ्रेवुअरी 8, 2021 द्वारा लिखित।
अमेरिकामा मेक्सिकन आप्रवासीहरू छन् अधिक सम्भावना हटाउन नसकिने वा मुनि ब्याक गरिएको छ जब अन्य आप्रवासी समूहहरूको तुलनामा। उही समयमा, अनुसन्धानले देखाउँदछ कि आप्रवासीहरूसँग उच्च स्तरको बचत अनुशासन छ, र मेक्सिकन आप्रवासीहरूको एक उच्च प्रतिशत, उनीहरूको बैंक खाता छ वा छैन भन्ने कुराको परवाह नगरिकन, अन्य आप्रवासी समुदायहरूको तुलनामा बचत संकलन गर्दछ। Mexican in..6 मिलियन मेक्सिकन मूलका अमेरिकामा बसोबास गर्ने, लगभग १२ करोड जो मेक्सिकोमा जन्मिएका थिए, लक्षित, अनुरूप वित्तीय उत्पादनहरूले समुदायलाई आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न मद्दत गर्दछ।
उत्पादनहरू, सेवाहरू, र दृष्टिकोणहरू सिर्जना गर्दछ जुन सांस्कृतिक रूपमा सान्दर्भिक र उपयुक्त छ - र उनीहरू हुन् जहाँ व्यक्तिहरूलाई भेटेर उनीहरूको सामर्थ्यमा निर्माण गर्दै - वित्तीय सफलताको लागि आफ्नो क्षमता अधिकतम।
मेक्सिकन आप्रवासीहरूका लागि वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नका लागि, सिटी, एमएएफको एक लामो समयको पार्टनरले, एक अनौंठो पहललाई सीड गर्‍यो जसले विश्वसनिय स्थानहरूमा भेंटानिलास डे एसेसरिया फिनान्सिएरा (VAF), वा "वित्तीय सशक्तिकरण विन्डोज" भनिन्छ, जो अमेरिका भर मैक्सिकन वाणिज्य दूतावासहरूको साझेदारीमा समावेश छ। मेक्सिकन सरकारको ईस्ट्रोडिक इनब्रोड (आईएमई) को संस्थान र गैर-नाफामुखी संस्थाहरूको राष्ट्रव्यापी नेटवर्कले अमेरिकामा मेक्सिकन समुदायलाई निःशुल्क, उच्च-गुणवत्ता, सांस्कृतिक सक्षम वित्तीय शिक्षा प्रदान गर्दछ।
पहल महत्वपूर्ण थियो किनभने बजारमा विकास गरिएका उत्पादनहरू कहिल्यै पनि डिजाइन गरिएको थिएन, वा कल्पना पनि गरीएको थिएन, Mission Asset Fund (MAF) ग्राहकहरूको दिमागमा। आप्रवासीहरू, विशेष गरी कम आय भएका आप्रवासीहरू - माध्यमिक प्रयोगकर्ता बन्छन्।
मे.ए.एफ. ले कडा परिश्रम गर्ने परिवारहरूको लागि उचित वित्तीय बजार निर्माण गर्न र स्केलेबल समाधानहरू सिर्जना गर्न यस मिशनको रूपमा राष्ट्रिय स्तरमा भ्याफ पहललाई प्रशासित गर्दछ। MyMAF अनुप्रयोग.
सुरक्षित, विश्वसनीय ठाउँहरूमा ग्राहकहरूलाई एक-बाट-एक कोचिंग प्रदान गर्दा एमएएफलाई अमेरिकामा बस्ने मेक्सिकन समुदाय, अमेरिकामा बस्ने मेक्सिकनहरूले आफ्नो वित्तीय सम्पत्तिलाई के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा रहेको वास्तविक डर सहित वित्तीय जीवनको बारेमा अझ गहिरो रूपमा जान्न अनुमति दिए। यदि तिनीहरूलाई निर्वासन कार्यवाही वा अन्य वित्तीय संकटहरूको सामना गर्नुपर्‍यो भने।
"वाणिज्य दूतावासहरुमा भौतिक ठाउँ समुदायले एक धेरै सुरक्षित ठाउँ को रूप मा बुझ्छ, र एक ठाउँ जहाँ तपाइँ सूचनाहरु निष्पक्ष हुन सक्नुहुनेछ, र साथै तपाईलाई चाहिने जानकारी पनि। यो तपाईंको लागि अनुकूल छ, ”मेक्सिकन राजदूत इभान रोबर्टो सियरा-मेडेलले भने।
वास्तवमा, ती विश्वसनीय वातावरणहरूमा ग्राहकहरूलाई भेटेर एमएएफ समुदायबाट अधिक इमानदार प्रतिक्रिया र प्रश्नहरू निकाल्न सक्षम थियो। प्रतिक्रियाले एमएएफलाई वित्तीय आपतकालिन सम्बन्धी पूरै नयाँ पाठ्यक्रम विकसित गर्न सहयोग पुर्‍यायो जसले समुदायका सदस्यहरूलाई संकटका क्षणहरूको लागि अझ राम्रो तयारी गर्न मद्दत गर्दछ, चाहे उनीहरू निर्वासनको कार्यवाही हो, भूकम्प, वा महामारी।
धेरैजसो आप्रवासीहरूले संघीय, राज्य र स्थानीय आयकर तिर्ने तथ्यहरूको बाबजुद पनि उनीहरूले बेरोजगार बीमा, स्वास्थ्य बेनिफिट्स, फूड स्ट्याम्प, र अन्य सुरक्षा-नेट प्रोग्रामहरू पहुँच गर्न सकेका छैनन् जुन अमेरिकी नागरिकहरूले खाँचोमा परेका छन्। ।
एमएएफको पाठ्यक्रममा "आप्रवासीहरूका लागि वित्तीय आपतकालीन कार्य योजना"आप्रवास सम्बन्धी आपतकालको तयारी गर्न सरल, मूर्त रणनीति सहित पैसा, घरहरू र अन्य सम्पत्तिहरू जोगाउने सल्लाहहरू, र वित्तीय तनावको समयमा कसरी तयारी गर्ने भन्ने बारेमा सल्लाहहरू सहित।
"हामीले काम गर्न छाडेनौं।"
क्यालिफोर्नियामा आपतकालीन तत्परता पकडको शब्द भन्दा बढी हो, जहाँ वन्य आगो, भूकम्प र अन्य प्रकोपको खतरा ठूलो हुन्छ।
माइग्रेसन पॉलिसी इन्स्टिच्यूटको मार्च २०२० को रिपोर्ट अनुसार ,० लाख आप्रवासीहरू COVID-१ crisis को स of्कटको मोर्चामा काम गरिरहेका छन्, स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, अस्पताल सफा गर्नेलगायत महामारीको क्रममा सेवाहरू प्रदान गर्न उनीहरूको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्दै। कोठा, फसल उठाउने र खाना उत्पादन गर्ने, र किराना स्टोरहरू र अन्य आवश्यक व्यवसायहरू स्टाफ गर्ने। उही समयमा, आप्रवासी समुदाय र विशेष गरी हिस्पैनिक महिलाहरू COVID-१ job कामको नोक्सानीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ।
भाग्यवस, उपकरण र प्रणाली एमएएफले मानिसहरूलाई संकटको क्षणहरूको लागि तयार गर्न मद्दत पुर्‍यायो COVID-१ p महामारीको लागि तुरून्त जवाफ दिन आवश्यक पूर्वाधार राख्यो।
जब आश्रय-ठाउँमा अर्डरहरू आइपुगे, MAF शुरू भयो ग्राहकहरुबाट सुनुवाइ जसले आफ्नो आयको स्रोत गुमाइरहेका थिए। प्रतिक्रियामा, MAF चाँडै एक राष्ट्र खडा गर्न सारियो द्रुत प्रतिक्रिया कोष स w्घीय राहतबाट वञ्चित कम ज्यालामा काम गर्ने मजदुरहरू, विद्यार्थीहरू र आप्रवासी परिवारहरूलाई आवश्यक पर्ने नगद प्राप्त गर्न।
मार्चमा सुरू गरिएको, रैपिड रिस्प्सन्स कोषले कम तलब मजदुर, विद्यार्थी र आप्रवासी परिवारहरूलाई कर भुक्तान गर्ने ITIN होल्डरहरू र उनीहरूका अमेरिकी नागरिक साझेदारहरू र बच्चाहरू समावेश गर्दै CARES ऐन राहतबाट वञ्चित $500 नगद अनुदान प्रदान गर्दछ। राष्ट्रिय सञ्जाल परिचालन गर्दा, एमएएफले राष्ट्रव्यापी 46 46,००० अनुदानमा नगद अनुदान र रिकभरी loansण उपलब्ध गराउन १ टीटीपी २T करोड raised० लाख भन्दा बढी स .्कलन गर्‍यो।
जेस, एक ग्राहक केन्द्रीय शहर छिमेकी पार्टनर्स, गैर नाफामुखी साझेदार जसले लस एन्जलसको मेक्सिकन वाणिज्य दूतावासमा भ्याएफमा सेवाहरू प्रदान गर्दछ, र्‍यापिड प्रतिक्रिया कोषको बारेमा सुने र अनुदानको लागि आवेदन दियो। महामारी भन्दा पहिले, उनले रेस्टुराँ उद्योगमा पूर्ण समय काम गरे, कहिलेकाँही दुई वा तीनवटा काम पनि गरे जसले गर्दा आफ्नो परिवारलाई सघाउन र reduceण कम गर्न सक्थे।
जेसेजले भने, “महामारीले हामीलाई, ल्याटिनोस र आप्रवासीहरूलाई बढी असर गरेको छ। “ल्याटिनोस अधिक खुलासा गरियो, किनभने हामीले काम गर्न छोडेनौं। त्यसकारण कहिलेकाँही तपाईं मद्दतको लागि सोध्नुहोस्। ”
“यस अवस्थामा मैले (रैपिड प्रतिक्रिया) अनुदान देखेँ, र मैले आवेदन दिएँ। यसले मलाई धेरै मद्दत गर्‍यो किनभने टेबलमा बढी खाना थियो, कम्तिमा केही दिनको लागि, र म केही थप किन्न सक्षम भएँ र केही चीजहरूको लागि तिर्न सक्षम भयो। र साँच्चै, यो ठूलो सहयोग थियो। "
जेसको अनुभवले आप्रवासी समुदायको लागि सान्दर्भिक, सांस्कृतिक रूपमा उपयुक्त सेवाहरू हुनुको महत्त्वलाई जोड दिन्छ।
"यस जस्तो संगठनलाई धन्यवाद जसले प्रेम, समर्पण, र व्यावसायिकताका साथ काम गर्छन्। धन्यबाद मानिसहरूलाई भन्नु भएको छ, 'यहाँ स्रोतहरू छन्। यहाँ मद्दतको सम्भावना छ। '
"म गर्वसाथ भन्न सक्छौं कि हामी आफ्नो समुदायको सेवा गर्दैछौं।"
शरणस्थानमा ठाउँका कारण धेरै स shut्गठनहरू शटर अपरेसन गर्न बाध्य भए पनि, VA लाई चाँडै नै आधार बनायो र यसले आफ्नो महत्वपूर्ण कामलाई निरन्तरता दिन नयाँ दृष्टिकोण सिर्जना गर्‍यो, साथै अनलाईन वित्तीय कोचिंग सेवाहरू प्रदान गर्ने र नयाँ वास्तविकता कसरी नेभिगेट गर्ने भन्ने बारे जानकारीमूलक वेबिनरहरू सहित।
"कोविड एउटा चुनौतीपूर्ण अवधि भएको छ," सियरा-मेडेलले भने। "हाम्रो रणनीति यथास्थितिमा छ कि सबै वाणिज्य दूतावासहरूले सेवाहरू प्रदान गरिरहन्छन्, तिनीहरूमध्ये केही व्यक्तिगत रूपमा र तिनीहरूमध्ये केही टाढा टाढाबाट, किनभने समुदायले अहिले सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ।"
"अमेरिकामा मेक्सिकन समुदायका लागि COVID प्रायः सबैभन्दा खराब अवस्था भएको थियो," कन्सुल जुलियो César Huerta-García, सामुदायिक मामिला विभाग, मेक्सिकन वाणिज्य दूतावास सैन फ्रान्सिस्कोले भने। "हामीले एमएएफसँग टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न, सूचनाात्मक भिडियोहरू र वेबिनारहरू सुरू गर्न, र संकटको बेलामा मद्दत गर्न सूचना र स्रोतहरू प्रदान गर्ने बारेमा धेरै सक्रिय हुन काम गरेका छौं।"
"भेन्टानिला अहिलेको कठिन समयको लागि उज्यालो हो, र म गर्वसाथ भन्न सक्छौं कि हामी आफ्नो समुदायको सेवा गरिरहेका छौं," हुर्टा-गार्सियाले भने।
असम्भव साझेदारीहरू सफलताको कुञ्जी हुन्
VAF पहल पछाडि असम्भव साझेदारी - मेक्सिको सरकार, एक वैश्विक वित्तीय संस्था, र समुदाय आधारित गैर नाफामुखी संगठनहरूको एक नेटवर्क - कम जटिल, प्रणालीगत चुनौतिहरूको सामना गर्न आवश्यक छ कि गहिरा, क्रस-क्षेत्र दृष्टिकोण को किसिमको उदाहरण दिन्छ। आय-समुदायहरू।
यो लेख होसे ए क्वायोनेज, एमएएफ संस्थापक र सीईओ, र मार्कि चाभेरिन, सिटी समुदाय लगानी र विकासका उपाध्यक्ष, को सहकार्यमा लेखिएको थियो। उत्तरी क्यालिफोर्निया.
हामी संकटको समयमा एक अर्कामा झुकाव गर्दछौं
José Quiñonez मा मे 7, 2020 द्वारा लिखित।
यदि मैले MAF को रैपिड प्रतिक्रिया कार्यको सारलाई एक शब्दमा भत्काउनु पर्छ भने त्यो हुनेछ: साझेदारी। नयाँ सामाजिक दूरीको बीचमा, हामी एक अर्काको कुरा सुन्न र यस अकल्पनीय स crisis्कटको समयमा एक अर्कालाई सहयोग गर्न पहिले भन्दा झन नजिक आउन सक्षम भएका छौं।
मार्चमा स्टे-एट-होम अर्डरहरू दिए पछि चाँडै, हामीले ग्राहकहरूलाई सहयोग गर्नका लागि रोक्‍यौं जुन हामीलाई थाहा थियो कि उनीहरूलाई नराम्रो असर पर्ने थियो।
हामीले तुरुन्तै ग्राहकहरूबाट सुनेका थियौं, आय गुमाउने बारे चिन्तित, कि उनीहरूले भाँडा तिर्ने, खाना किन्ने वा उनीहरूको मासिक बिलहरू पूरा गर्ने बारे कसरी थाहा पाउँदैनन्। हामीले उनीहरूको चिन्ता महसुस गर्‍यौं र छिटो सार्यौंaद्रुत प्रतिक्रिया कोष मार्च २० मा वास्तवमा पत्ता लगाउने महामारीको गहिराईलाई थाहा छैन।
स of्कटको प्रारम्भिक क्षणहरूमा, परोपकारी क्षेत्रले यो नयाँ चुनौतीलाई जवाफ दिनको लागि रैली गर्‍यो।
हामीले उनीहरूसँग काम गर्ने समुदायहरूको समर्थन गर्नका लागि अगाडि बढेका फाउंडेशनहरूसँग साझेदारी गरेका छौँ र उनीहरूको गहिरो चासो राख्छन्: कलेज विद्यार्थीहरू, रचनात्मक अर्थव्यवस्थाका सदस्यहरू, र आप्रवासी परिवारहरूले CARES ऐन छोड्छन्। उनीहरूले हामीलाई द्रुत रूपमा पैसा प्राप्त गर्न काम गरे, जोडतोडका साथ पहिचान गर्दै र हामीलाई सकेसम्म चाँडो यसलाई आवश्यक पर्नेहरूका हातमा पैसा लिन सहयोग गरे। मैले अनुदान प्रक्रिया यति चाँडो चाल देखेको छैन, पहिलो वार्तालापबाट प्रतिबद्धता र दिन भित्र वितरित गर्न sprinting। यो अचम्मको कुरा हो कि तपाईं के गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं स्पष्ट आँखाहरूमा हुन्छ र अन्तिम लक्ष्यको लागि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ।
कोष सising्कलन चलिरहेको बेला, हाम्रो टोलीले हाम्रो प्रणाली र टेक्नोलोजीलाई व्यापक रूपमा नगद अनुदान वितरण गर्न पुनःप्रदर्शन गरिरहेको थियो।
हामीले समर्थनका लागि स्थापना गरेका प्रत्येक समुदायहरूको लागि पूर्ण रूपमा नयाँ आवेदन प्रक्रिया हामी निर्माण गर्‍यौं, विचार गरौं कि हामी कसरी त्यहाँ बाहिर रहेको विशाल आवश्यकतालाई समान रूपमा समाधान गर्न सक्छौ भन्ने बारे विचार गर्न समय खर्च गर्दछौं। हामीले यो सुनिश्चित गर्‍यौं कि प्रत्येक अनुप्रयोगमा हामीले ध्यान र आदरका साथ प्रश्नहरूको सही सेटहरू सोध्यौं र प्रत्येक आवेदकको वित्तीय वास्तविकता, रणनीतिहरू, र स्रोतहरू बुझ्न समय लिएका थियौं। यसको साथ, हामी आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन सक्षम भयौं: हामीलाई थाहा थियो कि पहिले आयो, पहिले बढाइबढाइएको प्रणालीगत असमानता र पहुँचमा अवरोधहरू प्रदान गर्दछ, ती सब भन्दा छिटो इन्टर्नेट र उत्तम जानकारी भएका मानिसहरूलाई सुविधा पुर्‍याउने। हामीले एक विकल्प सिर्जना गर्नुभयो जसले संसाधनहरू केन्द्रित गर्थे जोसँग हामीलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक थियो। र, यस सम्पूर्ण प्रक्रियाको अन्तर्निहित, हामीले हाम्रो नयाँ प्रणालीलाई संवेदनशील वित्तीय डाटाको प्रभावकारिता र सुरक्षित ढ processing्गले प्रशोधन गर्न उस्तै दृढ प्रतिबद्धताका साथ स्थापित भएको सुनिश्चित ग .्यौं।
क्युरान्टिनमा सात हप्ता, हामी अहिले २०,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई $500 अनुदान प्रदान गर्ने बिचमा छौं जो हताश आर्थिक खाँचोमा छन्।
हामीले हाम्रा साझेदारहरूसँग के हासिल गरेका छौं त्यसको स्टक लिन यो प्रेरणादायक छ:
Rap द्रुत प्रतिक्रिया कोष कलेज विद्यार्थीहरू, युवा रचनात्मकहरू, र आप्रवासी परिवारहरूलाई समर्थन गर्दछ
सबै तीन कोषहरूमा स्रोतहरू पोखरी २ found जग
कुल $12M मानिसहरूलाई आपतकालीन वित्तीय राहतको साथ प्रदान गर्न
२ out आउटरीच पार्टनरहरू जसले हामीलाई योग्य आप्रवासी परिवारहरूसँग जोड्दैछन्
हाम्रो पक्षमा हाम्रा साझेदारहरू र २ MA एमएफिस्टासका हाम्रा सानो तर शक्तिशाली स्टाफको साथ, हामी समर्थन गर्न सक्षम भएका छौं:
For 75,०००+ व्यक्ति जो सहायता खोज्दै साईन अप गरे
,000२,०००+ ले पूर्वसूचना पूरा गर्यो व्यक्तिको वित्तीय स्थितिको बारेमा अन्तरदृष्टिको साथ
Secure०००+ हाम्रो सुरक्षित प्लेटफर्ममा पूर्ण अनुप्रयोगहरू पूरा भयो
,,500००+ अनुदान वितरण खाताहरूमा चेक र जम्मा गरियो
प्रत्येक चरणमा, यी सबै संख्या पछाडि धेरै सावधान र विचारशील काम भएको छ।
MAFistas लाई सुनिश्चित गर्नका लागि हामीले सही अनुप्रयोगहरू निर्माण गरेका छौं, सही प्रविधि प्रयोग गरेका छौं, र प्रत्येक समुदायका लागि सही प्रक्रिया सिर्जना गर्यौं जुन हामी सहयोग गरिरहेका छौं - सबै सावधानी र जोडतोडका साथ मानिसहरूलाई संकटको यस क्षणमा सहयोग गर्नका लागि। किन? सरल भाषामा भन्नुपर्दा: हामीले for,००० भन्दा बढी ईमेलहरू, कलहरू, टिकटहरू मद्दतको लागि मानिसहरूबाट प्राप्त गरेका छौं - हामी उनीहरूको कथाहरू सुन्छौं, उनीहरूको मद्दतको लागि कराउँछौं - र यसले स्टाफलाई उनीहरूको समयमा मानिसहरूका लागि देखाउन आम कार्यको लागि र बाहिर जान प्रेरित गरिरहेको छ। आवश्यक छ।
म केवल भन्न सक्छु कि यस्तो भक्ति देखाउँदा यो साँच्चिकै नम्र हुन्छ।
यसको पछाडि यो अनुकम्पा र अनुकम्पासहित हामी प्रविधिको र वित्त के हुन सक्छ भन्ने बारे उत्तम प्रदर्शन गरिरहेका छौं। र हामीसँग हाम्रा साझेदारहरूसँग, हामी प्रदर्शन गर्दैछौं कि यसले जनतालाई देखाउँनु भनेको के हो - संकटको यस घडीमा परिवारलाई आर्थिक सहयोगका साथ सहयोग गर्ने, खास गरी, आशा र एकताको सन्देश जुन तिनीहरू एक्लो छैनन्।
तपाईं MAF को द्रुत प्रतिक्रिया कोष समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ.
कम से कम मौसमको साथ मद्दत गर्ने संकट
José Quiñonez मा मार्च 20, 2020 द्वारा लिखित।
हामी एक पुस्ता परिभाषित स of्कटको बीचमा छौं। कोरोनाभाइरसले आधुनिक जीवनको पारस्परिक सम्बन्ध राखीरहेको छ, विश्वभरि लाखौं मानिसहरुको स्वास्थ्य र कल्याणको छिटो प्रसार र खतरामा पार्छ। कोही प्रतिरक्षा छैन।
यो अभूतपूर्व र उल्टाउने महामारीले सबैलाई पिरोल्दैछ, तर कम्तिमा र अन्तिममा भएका व्यक्तिलाई सबैभन्दा धेरै चोट पुर्याइनेछ।
कोरोनाभाइरस हाम्रो समाजमा गहिरो असमानताहरु उजागर गर्दैछ। घरहरू भएका आश्रयस्थल, सुरक्षाको लागि सम्पत्ति, र प्राप्त गर्न राहत दिइनेछ। तर घरविनाका मानिसहरू, सुरक्षाविना आप्रवासीहरू, राहत नपाएका कामदारहरूले आर्थिक स the्कटको सामना गरिरहेका छन्। पहिले नै ग्राहकहरु रोजगार, मजदुरहरु, र आय गुमाउनु पर्ने कथा संग हामीलाई सम्पर्क गरीरहेका छन्। तिनीहरू जान्दैनन् कि कसरी उनीहरू महिनाको अन्त्यमा भाँडा तिर्ने छन्।
व्यक्तिहरू अहिले गहिरो आर्थिक पीडा महसुस गरिरहेका छन्।
यसलाई अझ कडा बनाउने तथ्य यो छ कि हाम्रा धेरै ग्राहकहरू सरकारी कार्यक्रमहरूबाट समर्थन लिन सक्दैनन् वा गर्दैनन्। लाखौं आंशिक कामदारहरू, विद्यार्थीहरू, ठेकेदारहरू, आप्रवासीहरू र स्व-रोजगारीले बेरोजगारी बीमा, स्वास्थ्य सुविधाहरू, वा पोषण सहयोगको लागि योग्य नहुन सक्छन्। यो महामारीले वास्तविकता देखाउँदै छ कि त्यहाँ सबैभन्दा बढी आवश्यक मानिसहरूलाई को लागी कुनै अर्थपूर्ण सुरक्षा जाल छैन।
आप्रवासी परिवारहरू त्रसित छन्। संघीय सरकारले हालै एक "सार्वजनिक शुल्क नियम" लागू गरेको छ जसले आप्रवासी परिवारहरूलाई सार्वजनिक सेवाहरू प्रयोग गर्न रोक्नको लागि एक द्रुतशीती सन्देश पठायो। अब, तिनीहरू आश्चर्यचकित छन् कि अस्पतालमा जाँदा उनीहरू कानुनी स्थायी बासिन्दा हुने सम्भावनाहरूलाई चोट पुर्‍याउँछ कि। तिनीहरू चिन्तित छन्, "यदि म कुनै कागजात नभएको छु भने, के उपचारको खोजीले मलाई निर्वासनमा सार्न सक्छ?"
एमएएफमा, हामी ग्राहकहरूलाई सामुदायिक सेवाहरूमा जडान गर्दैछौं र सम्भव भएमा तिनीहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दैछौं।
त्यहाँ बढ्दो सचेतना रहेको छ कि यी क्षणहरूमा, सबैभन्दा बढी सहयोगी भनेको वास्तविक भावी नगद हो जुन मानिसहरूलाई भाँडा तिर्न, खाना किन्न र तिनीहरूलाई पछि पछाडिबाट जोगिन मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ। केहीको लागि, यो एक सानो हस्तक्षेप, एक रेफरल, सानो अनुदान वा एक ब्रिज beण हुन सक्छ जसले तिनीहरूलाई जारी राख्न सक्छ। तर समय महत्वपूर्ण छ।
हामी चाँडै नै एमएएफको द्रुत प्रतिक्रिया कोष माथि उठाउन कम्तीमा कम आय मजदुरहरू, आप्रवासी परिवारहरू, र विद्यार्थीहरूलाई पछाडि छोड्ने सम्भावनालाई मद्दत पुर्‍याइरहेका छौं, सरकारी कार्यबाट राहत नपाई। हामीसँग उपकरणहरू, प्रविधि र यी कमजोर समुदायहरूमा पुग्ने पहुँच छ तर यसलाई वास्तविकता बनाउन हामीलाई तपाईंको आर्थिक सहयोग चाहिन्छ।
अभूतपूर्व राष्ट्रिय स of्कटको यस घडीमा, यसले हामी सबैलाई एकसाथ आउन र एक अर्कालाई आपसी र सम्मानको नयाँ भावनामा सहयोग पुर्‍याउन लैजाँदैछ। हामी यसमा छौं, र केवल सँगै हामी एक राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौं।
क्लिक गर्नुहोस् यहाँ दान गर्न।
हामीले यो आउँदै गरेको देख्यौं।
José Quiñonez मा अगस्ट 14, 2019 द्वारा लिखित।
त्यस डरलाग्दो दिनदेखि जब ट्रम्प आफ्नो उम्मेद्वार घोषणा गर्न एस्केलेटरबाट ओर्ले, हामी सबैलाई गहिरो थाँहा छ कि यो आप्रवासीहरूका लागि खुला मौसमको सुरुवात हो। हामीले यसलाई पहिले देख्यौं। हताश राजनीतिज्ञहरूले घृणास्पद कुकुर-सीटीको बयानबाजीको प्रयोग गरेर र color्गका मानिसलाई अमानवीय र बलिदानको बकरा प्रयोग गर्छन्। मैले कहिले सोचेको थिइन कि खुला मौसम भनेको यस समयमा गोलिहरूको बहाव हो - अन्धाधुन्ध मान्छे मार्नुको कारण तिनीहरू मेक्सिकन देखिन्छन्, जोर्डन र आन्द्रे एन्कोन्डो लगायत दुबै अभिभावकले आफ्नो पाल्पा बच्चालाई एल पासोमा जोगाउँदैछन्।
अरु धेरैले जस्तै, एल पासोको समाचारले मेरो सुरक्षा र अमेरिकामा सम्बन्धित समझलाई हल्लायो।
मलाई लाग्छ कि त्यो वास्तवमा आप्रवासीहरू बिरूद्ध अभियानमा आतंकको अर्को घटना थियो। मलाई के स्पष्ट छ कि एल पासो शूटरले एक्लै कार्य गरेन। ह्वाइट हाउस पनि आफ्नै अभियान चलाउँदै छ जुन अब स्पष्ट छ: कार्य साइटहरू छापा मार्दै केवल यसको तमाशाको लागि; भिसा अस्वीकार गर्दै व्यक्तिहरूको परिवारसँग पुनर्मिलनको खोजीमा रेकर्ड दरहरूमा; परिवार छुट्टिदै शरण खोज्दै बस उनीहरूको दावीमा उदारता र उदासीनताको सन्देश पठाउन; र अब कानूनी बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको अध्यागमन स्थितिमाथि अनिश्चितताको साथ दंड दिइरहेछ यदि उनीहरूले सार्वजनिक सहयोग खोज्छन्। तिनीहरूले यी सबै गरिरहेछन् जनताको जीवनमा क्रूरता ल्याउन, आप्रवासी बनाउन असुरक्षित महसुस, चाहँदैन वा स्वागत छैन अमेरिकामा। हामी पनि यो महसुस गर्दछौं।
MAF मा, हामी हाम्रो पीडालाई कार्यमा परिवर्तन गर्दैछौं। योग्य १ immigTP2T1.5 मिलियन घुम्ती loanण कोषबाट हामी योग्य छौं कि आप्रवासीहरूलाई नागरिकता र DACA का लागि आवेदन दिन मद्दत गर्न।
[infogram id = "8a81d3c6-4732-45e2-aa5a-a989160fe941fउपसर्ग =" L0T "ढाँचा =" अन्तर्क्रियात्मक "शीर्षक =" MAF आप्रवास ”ण "]
हामी शून्य ब्याज loansणको संख्या दोब्बर गर्दैछौ जसले मानिसहरूलाई त्यसो गर्नका लागि आवेदन दिन लागत खर्च गर्न सक्दैन। Million मिलियन भन्दा बढी योग्य आप्रवासीहरूले अमेरिकी नागरिकताको लागि आवेदन दिन सक्छन्; हामी ती व्यक्तिहरूलाई मद्दत गर्न चाहन्छौं जुन आवेदनको $725 लागतको कभर गर्न सक्दैनन्। त्यहाँ खेर जाने समय छैन।
हामीसँग सामेल हुनुहोस् हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हामीसँग काम गर्नुहोस्। हामी अमेरिकालाई अगाडि बढ्न अनुमति दिन सक्दैनौं।
संयुक्त आर्थिक समिति अघि प्रमाणित गर्दै
José Quiñonez मा जुलाई 1, 2019 द्वारा लिखित।
अप्रिल ,०, २०१ 2019 मा, "अमेरिकी परिवार, समुदाय र नागरिक समाजको सुदृढीकरण गरेर अवसर विस्तार गर्ने" सम्बन्धी अमेरिकी कांग्रेस संयुक्त आर्थिक समितिको सुनुवाई अघि मैले प्रमाणित गरें। यो द्विपक्षीय निकाय देशभरि न्यून जनसंख्याको लागि आर्थिक गतिशीलता सुधार र सामाजिक पूँजी सुदृढीकरणका लागि सिफारिशहरू गर्न भेला गरिएको थियो। सुनवाईको क्रममा मैले कम आय भएका मानिसहरूले आफ्नो आर्थिक सम्भावना प्राप्त गर्न सामना गर्ने अवरोधहरूको बारेमा अन्तरदृष्टि प्रस्तुत गरे र कांग्रेसले तिनीहरूलाई वित्तीय छायाबाट माथि उठाउन के गर्न सक्दछ। म.अ.ए.एफ. र अन्य समुदायमा आधारित संगठनहरूको भूमिकालाई उत्थान गर्ने अविश्वसनीय अवसरको लागि म कृतज्ञ छु, कम आय भएका परिवारहरूलाई उनीहरूको अमेरिकामा वित्तीय जीवन सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउने सुदृढ स्रोत
धन्यवाद, अध्यक्ष ली, सेनेटर हसन, र संयुक्त आर्थिक समिति सदस्य यो महत्वपूर्ण सुनुवाइ को लागि।
मेरो नाम होसे क्विओनेज हो।
म एक आप्रवासी हुँ, नौ वर्षको उमेरको रूपमा रातको अन्धकारमा यस देशमा आएको थिएँ, सन् १ 198 66 को अध्यागमन सुधार र नियन्त्रण ऐन मार्फत मेरो स्थिति समायोजित गरीरहेछु, अमेरिकी नागरिक बनेँ, र अब म आफ्नो अमेरिकी सपनाको जीवन बिताइरहेको छु। कम आय भएका मानिसहरूलाई आर्थिक बजारमा देख्न, सक्रिय र सफल हुन मद्दत गर्दछ।
स्यान फ्रान्सिस्को, क्यालिफोर्नियामा आधारित एक गैर-नाफामुखी संस्था १ टीटी T टीका सीईओको रूपमा मेरो पहिलो अनुभव अनुभव छ जुन हाम्रा ग्राहकहरूले दिनहुँ सामना गर्ने डरलाग्दो आर्थिक चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्छन्।
र मैले के सिकें यो हो: अमेरिकामा गरिब हुनु महँगो छ, विशेष गरी वित्तीय मूलधारको बाहिरका मानिसहरूलाई।
राष्ट्रिय रूपमा, एक-इन-सात ल्याटिनोहरू अनबाँक गरिएका छन्, जसमा उनीहरूले जाँच वा बचत खाताहरू छैनन्। जबकि अन्वेषकहरू विभिन्न कारणहरू देखाउँछन् कि किन मानिसहरू खाता बिना नै जान्छन्, हामीलाई थाहा छ कि बैंकहरू आप्रवासन स्थितिमा आधारित वा आईडीको संकीर्ण फारमहरूको आधारमा मानिसहरूलाई बहिष्कार गर्दछन्। नतिजा स्वरूप, हाम्रो ग्राहकहरु धेरै बेवास्ता गरीएको छ र विकल्प बिना तर वैकल्पिक प्रदायकहरु मा निर्भर छ कि अधिक नगद चेक वा भुक्तान बिलहरु लाई अधिक चार्ज गर्दछ। औसत अन्डरवेर्डेड परिवारले १ पीटी २ टी २,२25,००० कमाउँछ भने उनीहरूको आम्दानीको १०१TPTP1T शुल्क र ब्याजमा भुक्तान गर्दछ वित्तीय सेवाहरूको लागि जुन हामी ती बैंक खाताहरूसँग प्राय: सित्तैं पाउँछौं।
Creditणको अभाव चुनौती हो। राष्ट्रिय रूपमा, लगभग एक इन-तीन ल्याटिनोहरू क्रेडिट अदृश्य हुन्छन्, यसको अर्थ तिनीहरूसँग क्रेडिट स्कोर वा क्रेडिट रिपोर्ट छैन। हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै, कोहीले पनि उधारो बिना गर्न सक्ने छ - मानिसहरूले घर किन्न वा व्यवसाय सुरु गर्न loansण लिन सक्दैनन्, उनीहरूले अपार्टमेन्ट भाँडा लिन सक्दैनन्, र केही राज्यहरूमा उनीहरूले रोजगारको क्रेडिट जाँच नगरी रोजगार पनि पाउन सक्दैनन्।
किफायती Withoutणमा पहुँच बिना नै मानिसहरू उच्च लागत ndणदाताहरूतर्फ फर्कन्छन् - केहिले साना-डलर loansणमा १००१टीपी १ टी एपीआर भुक्तानी गर्छन्, र छोटो अवधिका तनखा .णका लागि उल्लेखनीय रूपमा बढी।
आर्थिक गतिशीलतामा अवरोधहरू केवल आर्थिक मात्र होइनन्। व्यक्तिहरू वर्तमान आप्रवासी विरोधी राजनीतिक वातावरणबाट अनिश्चितताको बोझले ग्रस्त छन्, आफ्नो परिवार गुमाउने र उनीहरूको बचत खर्च गर्ने डरले। दस्तावेजको अभावको कारण हिरासतमा राखिएको छ भन्नेमा धेरै चिन्तित छन् iting आर्थिक स—्कटलाई प्रज्वलित गर्ने। जमानत एक्लैले तिनीहरूलाई $5,000 झिक्न सक्दछ; $20,000 सम्म, कानुनी प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्दै; र लागत त्यहाँ माउन्ट।
त्यसोभए, हामी कसरी तिनीहरूको आर्थिक सम्भावना महसुस गर्न मद्दत गर्न सक्दछौं जब तिनीहरू आर्थिक रूपमा अदृश्य हुन्छन् र उनीहरूको जीवनमा ठूलो चुनौतीहरू सामना गर्छन्?
हामीले कसरी उत्तरहरू पायौं कि कसरी हाम्रा ग्राहकहरूले सामाजिक पूंजीको लाभ उठाउँछन् family परिवार र साथीहरूसँगको उनीहरूको सम्बन्ध जीवित रहन र फस्टाउनको लागि।
हाम्रो ग्राहकहरु एक साथ leण दिन र बचत को एक समय सम्मानित परम्परा अभ्यास; यो एक गतिविधि हो जुन विश्वभरि सयौं बिभिन्न नामहरू द्वारा परिचित छ तर जुन अनिवार्य रूपमा उस्तै हो। समूहको एक समूह भेला हुन्छन् र आफ्नो पैसा पोखाउन सहमत हुन्छन् ताकि समूहको एक सदस्यले एकमुश्त रकम लिन सक्नेछन्, र समूहमा सबैले एकमुष्ठ रकम पाउने सम्भावना नभएसम्म तिनीहरू साप्ताहिक वा मासिक आधारमा फेरि त्यसो गर्छन्। । जब मानिससँग loansणमा पहुँच हुँदैन, यो उनीहरूले आफ्नै शब्दहरू र विश्वास प्रयोग गरेर कसरी आफ्नै सिर्जना गर्दछ।
हामीले यस परम्परामा हाम्रो Lending Circles कार्यक्रम निर्माण गरेका छौं। हामी सहभागीहरूले प्रोमिसरी नोटमा हस्ताक्षर गरेर loansण औपचारिक बनायौं, जुन MAF ले त्यसपछि सेवाहरू र क्रेडिट ब्यूरोलाई रिपोर्ट गर्दछ।
२०० 2008 मा कार्यक्रम सुरू गरेदेखि नै हामीले ११२२ loans loansण बनाएका छौं - सहभागीहरूले buildण बढाउनको लागि। उनीहरूले क्रेडिट बजारमा उनीहरूको सम्भावनाको विश्व खोल्दै उनीहरूको औसत स्कोर १ 168 अंकले बढेको छ।
र पुन: भुक्तानी दर .3 99..3 प्रतिशत छ - माइक्रोलेन्डि world संसारमा एक अनसुना-दर।
Lending Circles हामी के गर्न सक्दछौं भन्ने उदाहरण हो — र — का लागी यदि हामी कार्यक्रमको लागि र नीतिहरू सफलताको लागि डिजाइन गर्दछौं, जनताको सामर्थ्य र सामाजिक पूँजीमा आधारित वास्तविक स्थायी परिवर्तन सिर्जना गर्न।
यस दृष्टिकोणबाट गरिएको आश्वासनको बाबजुद पनि, बाधकहरूको फन्दामा परेका लाखौं मानिसहरूलाई तिनीहरूको आर्थिक सम्भाव्यतालाई कम गर्न मद्दत गर्न पर्याप्त छैन।
हामीलाई व्यक्तिहरूको चुनौतीहरू बुझ्नको लागि अझ राम्रा डाटा आवश्यक छ। राष्ट्रिय डेटासेटमा आधारित अनुसन्धान रिपोर्टहरूले अक्सर आर्थिक रूपमा अदृश्य हुनेहरूलाई वेवास्ता गर्दछन्, जसले हाम्रो समाजको महत्वपूर्ण खण्डहरू हराइरहेका छन्।
कांग्रेसले SNAP जस्ता सार्वजनिक लाभ कार्यक्रमहरूको सम्पत्ति सीमाहरू हटाउन सक्दछन् जुन परिवारहरूको लागि जीवन रेखा हुन् जुन पूरा गर्न पर्याप्त पैसा कमाउँदैनन्।
कांग्रेसले स्पष्ट गर्न सक्दछ कि अमेरिकी नागरिकता वित्तीय सेवाहरू पहुँच गर्नका लागि आवश्यक छैन, र खाताहरू खोल्ने क्रममा सरकारले जारी गरेका आईडीहरूको लागि अनुमति दिन्छ।
कांग्रेसले उपयोगिताहरू, भाडा, र टेलिकॉमबाट क्रेडिट रिपोर्टमा समावेश हुन सकारात्मक भुक्तान डाटालाई अनुमति दिएर अदृश्य creditणको संख्यालाई घटाउन सक्छ।
र क्ग्रेसलाई "abilityण चुक्ता गर्ने क्षमता" आन्तरिकरण मापदण्ड र साना-डलर र payday forणको लागि लामो चुकौती सर्तहरू आवश्यक पर्दछ।
म विश्वास गर्दछु यी सुधारहरूले जनताको आर्थिक क्षमता अनलक गर्न लामो यात्रा गर्न सक्दछन्, र तिनीहरूलाई अमेरिकी अमेरिकी सपना साकार गर्न पनि मद्दत गर्दछ।
यस सुनुवाइ समाउनु भएकोमा धन्यबाद र म यो महत्वपूर्ण वार्तालाप जारी राख्न अगाडि हेर्छु।
रब्बलमा शामिल हुनुहोस्!
José Quiñonez मा अगस्ट 1, 2018 द्वारा लिखित।
दस बर्ष अघि हामीले सैन फ्रान्सिस्कोमा एक आन्दोलन शुरू गर्‍यौं, जुन देशभरि हजारौं कम आय र आप्रवासी परिवारहरू आर्थिक दृष्टि, सक्रिय र वित्तीय प्रणालीमा सफल हुन अग्रसर भएका छन्।
के शून्य ब्याज offeringणको प्रस्ताव गर्दै हाम्रो फ्ल्यागशिप Lending Circles कार्यक्रमको साथ शुरू भयो, मानिसहरूलाई तिनीहरूको आर्थिक जीवन सुधार गर्न मद्दतको लागि उत्पादन र सेवाहरूको सम्पूर्ण सूटमा विकसित भएको छ। हामी तिनीहरू जहाँ छन् मानिसहरूलाई भेट्ने दृढ अठोटका साथ सबै कुरा गर्छौं र तिनीहरूको जीवनमा राम्रो के छ निर्माण गर्न। हामी अहिले बे एरियामा मेक्सिकन कन्सुलेट्समा वित्तीय कोचिंग "विन्डोजहरू" प्रदान गर्दैछौं, महँगो इमिग्रेशन शुल्कहरू कभर गर्न मद्दतको लागि वित्तपोषण, र ग्राहकहरूलाई अझ बढी फस्टाउन मद्दत गर्न डिजाइन गरिएका नवाचार उपकरणहरू। र सबै समयमा, हामी अझै पनि मुनाफारहितको साथ काम गर्दैछौं देश भरमा हाम्रो कामको गहिराइ र विस्तार गर्न।
हामीसँग धेरै उत्सव मनाउनेहरू छन्, तर हामी नोभेम्बरमा आउँदै गरेको भन्दा अझ बढी उत्साहित छौं: MAF शिखर सम्मेलन! हामी नोभेम्बर १ and र १ San नोभेम्बरमा सान फ्रान्सिस्कोमा पार्टनरहरू, सहयोगीहरू, फन्डरहरू, साथीहरूको यस महत्त्वपूर्ण भेलालाई होस्ट गर्दैछौं!
यस बर्षको विषयवस्तु "ट्रान्स्सेन्ड" हो। विकसित। उडान लिनुहोस्। " हामी आफूलाई र हाम्रा समुदायहरूलाई तितलिको जलगैंडाको रूपमा कल्पना गर्छौं, कठिनाइहरूको सामना गर्न विकसित भएका छौं, र जतिसुकै ठूला वा अचानक जस्तो देखिए पनि अवरोधहरू पार गर्न सक्षम भएका छौं। हामीले सुरु गरेका यात्राहरू हामी समाप्त गर्छौं र हामी जान्दछौं अन्तिम गन्तव्य अझै अगाडि छ।
हामी परिवर्तन एजेंटहरूको अझ ठूलो नेटवर्क सँगै ल्याउन पाउँदा रोमाञ्चित छौं - गैर नाफामुखी, टेक, वित्त, र सामाजिक क्षेत्रहरू भरिका नेताहरू — सबै नयाँ, दीर्घ-स्थायी समाधानहरू सिक्न, प्रेरित गर्न र निर्माण गर्न खोजिरहेका छन्। प्रिन्स्टन युनिभर्सिटीका फ्रेड व्हेरी जस्ता नेताहरू र लेभिय स्ट्रॉस फाउन्डेशनका डेनियल ली र वाल्टर एन्ड एलिस हास कोषका एलेना चाभेज क्युजाडा जस्ता लामो समयका अधिवक्ताहरूले गरेका राम्रा कामलाई प्रकाश पार्न र हाम्रो ध्यान र ऊर्जा बदल्न सोचेका हुनेछौं। निर्माण कार्यहरु तिर कि सहिनेछ।
हामी अगाडि उफ्रन र चुनौतीहरु को लागी सामना गर्न को लागी समाधान निर्माण गर्दा हामी स्मार्ट र मेहनती हुनुपर्छ। पार्टनरशिप पोषण गरेर, एक अर्काबाट सिकेर, राम्रोको लागि प्रविधि प्रयोग गरेर, र संकल्प र समाधानहरूको पवित्र कथाहरू साझा गरेर, हामी उद्देश्यका साथ सँगै आउनेछौं र आगामी १० बर्षको लागि तयार रहनेछौं।
रब्बलमा सम्मिलित हुनुहोस्. हामीसँग उडान लिनुहोस्.
हामी झगडा गरिरहन्छौं
José Quiñonez मा जुन 21, 2018 द्वारा लिखित।
मेरो आत्माले बच्चालाई आफ्ना बाबुआमाको लागि inconsolably रोइरहेको, मद्दत माग्दा दुखिरहेको छ। म यी बच्चाहरूका बारेमा हरेक पल्ट सोच्दछु जब म मेरा बच्चाहरूतिर हेर्छु, यो आशामा कि हामी यो बौलाहापनलाई रोक्नेछौं र उनीहरूका आमा र बुवाहरूसँग पुनर्मिलन गर्नेछौं जसले उनीहरूको लामो र खतरनाक यात्रामा लाखौं आप्रवासीहरूले अमेरिकामा सुरक्षाको खोजीमा लिएका छन्।
तर शरणको सट्टा, उनीहरूले एउटा सरकार फेला पारे जसले उनीहरूको निर्दोषतालाई आतंकित बनाउँदछ, बच्चालाई अभिभावकबाट टाढा फाल्यो र प्रक्रियामा उनीहरूको मानवीय र कानुनी अधिकार हनन गर्दछ। ट्रम्पको "शून्य सहिष्णुता" नीति दासत्व, जापानी इन्टर्मेन्ट शिविर, र नाजी जर्मनी सम्म फिर्ता आएको छ। अनि केको लागि? यस प्रशासनले लाजवाब हिसाब गरे कि बच्चालाई बन्धक बनाउँदा उनीहरूको राजनीतिक एजेन्डा अगाडि स crisis्कट उत्पन्न हुन्छ।
उनीहरूले एउटा ठूलो गल्ती गरे।
ट्रम्पको नयाँ कार्यकारी आदेश संकट समाप्त भएन। प्रशासन अझै पनी "शून्य सहिष्णुता" को नीति अनुसरण गर्दै छ, शरणार्थीहरुलाई अमेरिका / मेक्सिको सीमाको हिरासत शिविरहरुमा राख्दै। र तिनीहरू २ US3०० बच्चालाई आफ्नो आमाबुवासँग अमेरिकाको हिरासतमा पुनर्मिलन गर्न केही गरिरहेका छैनन्। यसको साटो उनीहरू आफ्नो खेल योजना अनुसरण गर्दैछन्, बच्चाहरूलाई मोलतोल गर्ने चिप्सको रूपमा ट्रम्पको पर्खाल फन्ड गर्न का pressure्ग्रेसलाई दबाब दिन, कानुनी आप्रवासीहरूका लागि भिसा कटौती गर्न, विविधता भिसा कार्यक्रम अन्त्य गर्न, आप्रवासीहरूलाई अपराधीकरण गर्ने र लाखौंको नागरिकता पाउने बाटोमा अवरोध खडा गर्ने। कडा परिश्रम गर्ने आप्रवासीहरु जसले हाम्रो अर्थव्यवस्था चलाउँछन्, तर अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, जसले संयुक्त राज्यलाई घर भन्छन्।
हामी ट्रम्पको कार्यबाट आश्चर्यचकित छैनौं, तर हामी आक्रोशित र सक्रिय भएका छौं। सुरुदेखि नै यस प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई बयान गर्दै बयान गरेको छ बलात्कारी, अपराधी, ठगहरू वा जनावरहरू। उनका कार्यहरू यस बयानबाजीको साथ मिलाइएको छ: DACA अन्त्य गर्दै र Dreamers लाई विधायी समाधान उपलब्ध गराउन द्विपक्षीय प्रयासहरूलाई टार्पेडो गर्ने। चरण, चरणमा, उहाँ आप्रवासी र र color्गीन मानिसहरूका लागि हाम्रो समाजको पूर्ण सदस्य हुनको लागि कुनै आशा समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ।
स्पष्टतया, उनी उदीयमान अमेरिकासँग डराउँछन् जुन धनी र विविध छ, रंगीन र जटिल छ। ऊ अमेरिका जस्तो डराउँछ जुन ऊ जस्तो देखिदैन।
तर जतिसुकै ऊ हामीलाई घृणा गर्न वा घृणा गर्‍यो, त्यसले हामीबाट छुटकारा पाउन सक्दैन। उनको प्रशासन आप्रवासी परिवारहरूको लागि जीवन दयनीय र असंभव बनाउन कडा मेहनत गरिरहेको छ। तिनीहरू अपराधी हुनेछन्, तिनीहरू हिरासतमा लिनेछन्, उनीहरू निर्वासनमा आउनेछन्, उनीहरू आतंकित हुनेछन्, उनीहरूले जे थोरै भए पनि जफत गर्नेछन्; तर ती हामीबाट छुटकारा पाउन सक्दैनन्।
हामी लचिलो छौं। हामी बचेका हौं। र हामी एक्लो छैनौं। त्यहाँ लाखौं व्यक्तिहरू डराएनन् र जो हामीसँग उदाउँदो अमेरिकाको लागि लड्नेछन कि अहिले सीमानामा रोइरहेका ती बच्चाहरूको लागि प्रशस्त कोठा, आलिंगनहरू र श्रोतहरू प्रशस्त छन्।
मलाई यो भन्नुहोस् सुन्नुहोस्: ट्रम्पको अन्तिम शब्द छैन। उसले अमेरिकालाई के आदेश दिँदैन, वा के हुन्छ भनेर।
एमएएफमा, हामी दोब्बर हुँदैछौं। हामी अधिक कानुनी स्थायी बासिन्दाहरूलाई नागरिकताका लागि आवेदन दिन मद्दत गरिरहेका छौं। धेरै वर्षहरूमा हामीले we,००० भन्दा बढी अमेरिकी नागरिकता र DACA अनुप्रयोगहरूको लागि वित्त पोषण गरेका छौं र आउने महिना र वर्षहरूमा हजारौं गर्न तयार छौं। अहिले 8..8 मिलियन कानूनी स्थायी निवासीहरू नागरिकताका लागि योग्य छन्। हामी उनीहरूलाई प्राकृतिक बनाउन मद्दत गर्न चाहन्छौं, आउँदो चुनावमा भोट दिन सक्षम हुनको लागि पहिलो कदम चाल्न। र हामी आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको आर्थिक जीवन सुधार गर्न, उनीहरू बसोबास गर्ने जरा राख्न सहयोग गर्न, र आफू भरोसा राख्छु भन्ने आत्मविश्वास महसुस गर्न पहिलेभन्दा अझ बढी कटिबद्ध छौं।
तिनीहरू हामी एक राष्ट्रका रूपमा को हौं भन्ने पक्ष र पार्सल हुन् र हामीलाई उनीहरूको सपना, उर्जाको आवश्यकता छ कि उदीयमान अमेरिका निर्माण गर्न।
संसारभरि सुनेको चिच्याएको आवाज बेकार जानेछैन। बच्चाहरूले आफ्ना माता-पिताको हात हतियार बोक्छन्, र समाजका सीमान्तका लाखौं मानिसहरू, हामी स्वतन्त्रता र मर्यादा र सम्मानको लागि स fighting्घर्ष गर्दैछौं, जुन नैतिक ब्रह्माण्ड एमएलकेको एक पटक उल्लेख गरिएको छ - झुक्दा यो न्यायतिर नफर्कुन्जेल।
प्रेम र कृतज्ञताका साथ,
अदालतमा आप्रवासीहरूको अधिकारको रक्षा गर्न काम गर्ने कानूनी र नाफारहित संगठनहरूलाई दिनुहोस् र सीमानामा परिवारहरूलाई प्रत्यक्ष सहायता प्रदान गर्नुहोस्।
ACLU फाउंडेशन नाफारहित हो व्यक्तिको नागरिक अधिकारको रक्षा गर्दै। तिनीहरूको आप्रवासी अधिकार परियोजना आप्रवासीहरूको अधिकारको रक्षा गर्दछ र वर्तमानमा पारिवारिक बिछोडका मुद्दाहरूको अभियोग लगाइरहेको छ।
शिक्षा र कानूनी सेवाहरूको लागि शरणार्थी र आप्रवासी केन्द्र (RAICES) मध्य र दक्षिण टेक्सासका आप्रवासी बच्चाहरू, परिवार र शरणार्थीहरूलाई कानूनी सेवाहरू प्रदान गर्ने एक नाफारहित संस्था हो। तिनीहरू आमाबुवालाई नजरबन्दबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गर्दैछन ता कि तिनीहरू आफ्ना बच्चाहरूको साथ पुनर्मिलन हुन सकून्।
बच्चाहरूलाई रक्षाको आवश्यकता हुन्छ (KIND) सैन फ्रान्सिस्को र वाशिंगटन डीसी KIND सहित दश शहरहरुमा कार्यालयहरु संग एक राष्ट्रिय नीति वकालत संगठन हो, असंगत आप्रवासी बच्चाहरु को प्रतिनिधित्व गर्न समर्थक बोनो वकिलहरु लाई प्रशिक्षण।
सिमाना एन्जिल्स छ एक स्यान डिएगो-आधारित गैर नाफामुखी आप्रवासी अधिकार, आप्रवास सुधार, र सीमा मा आप्रवासी मृत्युको रोकथाम मा केन्द्रित।
आप्रवासी परिवारहरूसँग खडा रहनुहोस्: #eretoStay एमएएफको अभियान भनेको डिएसीए, नागरिकता, टीपीएस र ग्रीन कार्ड अनुप्रयोगहरूलाई सहयोग जुटाउन कोष जुटाउने अभियान हो जुन आप्रवासन स्थिति परिवर्तन गरेर परिवारहरूलाई बिगार्नबाट जोगाउन सकिन्छ।
परिवारसँगै बस्न सहयोग पुर्‍याउन तपाईंको का Congress्ग्रेसका सदस्यलाई कल गर्नुहोस्। मांग छ कि कांग्रेसले शरण दावी सुन्नुहोस् र २,3०० बालबालिकालाई उनीहरूका अभिभावकबाट अलग गरें।
व्हाइट हाउस सार्वजनिक टिप्पणी लाइन: 202-456-1111
न्याय विभाग सार्वजनिक टिप्पणी लाइन: 202-353-1555
सडकमा जानुहोस् र एकमा सामेल हुनुहोस् परिवारहरू सँगसँगै छन् 30० जूनमा तपाईंको नजिक रैली
सोशल मिडियामा तपाइँको समर्थन देखाउनुहोस् (#FamilleBelongTogether #KeepFamilleTogether)।
कसरी एमएएफले largest दिनमा सबैभन्दा ठूलो DACA नवीकरण अभियान सुरू गर्‍यो
José Quiñonez मा जनवरी 13, 2018 द्वारा लिखित।
ट्रम्प प्रशासनले सेप्टेम्बर,, २०१ 2017 मा DACA समाप्त गर्‍यो, देशभरिका समुदायहरूमा कष्ट र डरको एक लहरलाई जलाएर। २०१२ पछि, सयौं हजारौं युवाहरू DACA कार्यक्रमको लागि दर्ता गर्नको लागि छायाबाट बाहिर आए कि अमेरिकामा पूर्ण सहभागी हुने पहिलो चरण हुनेछ भन्ने आशामा, धेरैलाई आफ्नो एकमात्र घरको रूपमा थाहा छ। आफ्नो जीवनमा अनिश्चितताको कालो बादलको बावजुद, युवा आप्रवासीहरू आशाको पूर्तिमा माथि उठिरहेका छन्। उनीहरूले हाम्रो पुस्ताको सामाजिक न्याय आन्दोलनको आयोजन गरिरहेका छन्, एक सपना ऐनको वकालत गरिरहेका छन् जसले युवा आप्रवासीहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछन्, र लाखौं निर्बाध आप्रवासीहरुलाई पनि सहयोग पुर्‍याउन व्यापक आप्रवास सुधारको लागि जोड दिइरहेका छन्।
लस एन्जलसको बिहानको क्र्याकमा म एउटा फ्लाइटमा चढ्दै थिएँ जब ट्रम्प प्रशासनले बाल्यकाल आगमनको लागि डिफर्ड एक्शन (DACA) कार्यक्रम अन्त्य गरिरहेको घोषणा गर्‍यो।
२०१२ देखि, यस कार्यक्रमले युवा, undocumented आप्रवासीहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा बच्चाहरूको रूपमा ल्याइएको प्रदान गरेको छ - जसलाई सामान्यतया "Dreamers" भनेर चिनिन्छ - निर्वासन र कार्य अनुमतिबाट सुरक्षाको साथ। हेडलाइन्सहरूमा स्क्रोलिंग गर्दै, मलाई थाहा थियो यो कठिन दिन हुनेछ। प्रशासनले डिएसीए अन्त्य मात्र गर्‍यो, तर यो एउटा हास्यास्पद क्रूर तरिकाले गर्दै थियो। घोषणाले नयाँ आवेदकहरूको लागि डिएसीए समाप्त गर्‍यो - जसमध्ये धेरै हाई स्कूलका विद्यार्थीहरू थिए जसले डिएसीए प्रयोग गरेर उच्च शिक्षा लिने सपना देखेका थिए - जबकि उनीहरूको कामको अधिकारपत्र मार्च,, २०१ by सम्म समाप्त भएमा उनीहरूको स्थिति नवीकरण गर्न केवल एक महिना मात्र आवेदनहरू पेश गर्नका लागि डिएकएसँग पहिले नै आवेदनहरू पेश गर्ने समय दिएका थिए। । सपना देख्नेहरु आफैंले घोषणाको बारेमा सिक्न को लागी छोडे र उनीहरु लाई योग्य छ कि छैन निर्धारण गर्छन्।
१ 154,००० सपना देख्ने व्यक्तिले उनीहरूको सुरक्षा स्थितिलाई दुई बर्षसम्म विस्तार गर्न सक्दछन्। तर तिनीहरूले कुनै पत्र प्राप्त गरेनन् वा फोन कल प्राप्त गरेनन्। तिनीहरूलाई नवीकरण गर्न प्रोत्साहित गर्न त्यहाँ कुनै आउटरीच थिएन।
आप्रवासी समुदाय र अधिवक्ताहरूको घोषणाले आक्रोशित भए। देश भरका शहरहरुमा विरोध प्रदर्शन भयो। मानिसहरू रिसाए, र ठीक त्यस्तै। हाम्रो सरकारले राष्ट्रपति ओबामाले गरेको वाचालाई भ breaking्ग गरिरहेको थियो जसले कार्यक्रममा भर्ना भएका immig००,००० युवा आप्रवासीहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्यो। वर्षौंदेखि दुबै कांग्रेसले दुबै अमेरिकाको टुक्रिएको अध्यागमन प्रणाली सुधार गर्ने आवश्यकतालाई स्वीकारे तर त्यसो गर्न असफल भए, जसले लाखौं आप्रवासीहरूलाई छायाँबाट बाहिर आउन सकेन। युवा समुदायका लागि DACA एक छोटा, अस्थायी समाधान थियो किनकि हामीले कांग्रेसले हाम्रो टुटेको प्रणालीलाई सुधार गर्ने प्रतीक्षा गरिरहेका थियौं।
सत्र DACA समाप्त हुनेछ घोषणा
सपना देख्नेहरू भन्छन् कि यो मनोवैज्ञानिक यातना जस्तै छ
सरकारबाट आधिकारिक सूचना छैन
२०१२ मा राष्ट्रपति ओबामाले डीएसीए स्थापना गर्ने कार्यकारी आदेश दिएका थिए जस अन्तर्गत संघीय सरकारले १ 16 औं जन्मदिन अगाडि अमेरिका ल्याइएको, स्कूलमा भर्ना भएका, उच्च माध्यमिकबाट स्नातक गरेका वा विदेशबाट सम्मानित अनुभवीहरुलाई अमेरिका पठाएको आप्रवासीहरुलाई देश निकाला नगर्ने वाचा गरेका थिए। कोस्ट गार्ड वा अमेरिकाको सशस्त्र सेनाको सट्टामा, सरकारले तिनीहरूलाई काम गर्न अनुमति दिनेछ र सामाजिक सुरक्षा नम्बरहरू प्रदान गर्नेछ। यसको बदलामा, सपना देख्नेहरूले होमल्याण्ड सुरक्षा विभागको साथ दर्ता गर्ने र उनीहरूको सबै व्यक्तिगत जानकारी प्रदान गर्ने थियो। MA००,००० सपना देखी गर्ने जसले DACA का लागि दर्ता गरे, MAF मा, हामी पनि त्यो वाचामा विश्वास गर्‍यौं - तिनीहरू दिनको उज्यालोमा खुलेआम बाँच्न सक्दछन्।
जब राष्ट्रपति ओबामाले पहिलो पटक DACA सिर्जना गरे, हामीले उच्च आवेदन शुल्क (अहिले १TP2T495) लाई फाइनान्स गर्न शून्य-ब्याज loansण उपलब्ध गराउन थाल्यौं। हामीले गत years बर्षमा १,००० भन्दा बढी Dreamers सँग काम गरेका छौं। MAF को लागी, यो व्यक्तिगत थियो।
हामीले दैनिक आधारमा DACA का फाइदाहरू देख्यौं। DACA को साथ, हामीले पहिलो हेराइ देख्यौं कि हाम्रा ग्राहकहरूले अझ धेरै भुक्तानी गर्ने रोजगारहरू पहुँच गरेर उनीहरू र उनीहरूको परिवारलाई अझ राम्ररी सहयोग गरिरहेका थिए। तिनीहरूले बैंक खाता खोले र बचत गर्न शुरू गरे। प्रत्येक मेट्रिकमा, DACA ले उनीहरूलाई अगाडि बढाउँदै, उनीहरूको सृजनात्मक उर्जा र मानवीय क्षमताको प्रदर्शन गर्दछ। DACA को साथ, हाम्रा केही ग्राहकहरू स्कूलमा भर्ना भए, बने डाक्टरहरू वा नर्सहरू। अन्य, जस्तै गुस्ताभो, राम्रो तिर्ने रोजगारहरू सुरक्षित। उनले घरहरू सफा गर्न छोडे र लाटिनो समुदायको सेवा गर्ने वेल्स फार्गो बैंक टेलरको रूपमा काम लिन सक्षम भए
मैले भोलिपल्ट लस एन्जलसमा बिताएँ, ईमेलहरू फील्ड गर्दै र अर्को चरणहरू मार्फत सोच्न प्रयास गर्दै। बिहीबार बिहान, म एमएएफको अफिसमा फर्कें जहाँ हामीसँग पहिलो पोस्ट-स्टाफको बैठक थियो। हामीले हाम्रा विकल्पहरूको बारेमा कुरा गर्यौं, कसरी अगाडि बढ्ने भनेर पत्ता लगाउने कोशिस गर्दै। केहि नगर्नु विकल्प थिएन। वास्तवमा कसरी थाहा पाउनु भएन, त्यस बिहान हामीले यति धेरै सपना देख्नेहरूलाई उनीहरूको स्थिति नवीकरण गर्न मद्दत गर्ने संकल्प गर्‍यौं।
सपना देख्नेहरूसँग अक्टुबर dead को म्याद अगाडि नविकरण गर्न केवल चार हप्ता थियो, त्यसैले हरेक मिनेट फरक पर्‍यो। त्यो दिमागमा राख्दै, हामी शून्य ब्याज offerण प्रस्ताव गर्न सहमत भयौं, तर पहिले भन्दा धेरै ठूलो पैमानेमा। हामी यी withणका साथ राष्ट्रिय गइरहेका थियौं। यो हाम्रो लागि दुई कारणका लागि एक विशाल परिचालन चुनौती हुनेछ। पहिले, यस बिन्दु सम्म, हामी केवल क्यालिफोर्नियामा सपना देख्नेहरूको लागि DACA आवेदन शुल्क मात्र वित्त पोषण गर्थ्यौं। दोस्रो, यद्यपि एमएएफ एक राष्ट्रिय संगठन हो, हामी क्यालिफोर्निया बाहिर ग्राहकहरूको सेवा दिन गैर नाफामुखी साझेदारहरूको नेटवर्क मार्फत काम गर्दछौं। दक्षताको खातिर, हामीले भौगोलिक बाहेक-पहिलो पटकका लागि अमेरिकाभरका ग्राहकहरू समक्ष पुग्न र सेवा गर्न आवश्यक पर्दछ।
हामीले applications० दिनमा १,००० अनुप्रयोगहरूको वित्तपोषण गर्ने लक्ष्य राख्यौं - जुन fiveणहरू हामीले विगत पाँच बर्षमा प्रदान गरेका थियौं।
मैले हाम्रो नयाँ fundण कोषको लागि समर्थन मागेमा फन्डरहरूलाई सम्पर्क गर्न थालें। हामीलाई $500,000, र छिटो चाहिएको थियो। म फन्डि forका लागि फोनहरू काम गरिरहेको बेलामा एमएएफका कर्मचारीहरू नयाँ loanण कोषको संचालन गर्न जोडदार प्रयास गरिरहेका थिए। हाम्रो संचार टोलीले विशेष रूपमा DACA नविकरण forणहरूको लागि नयाँ वेबसाइट निर्माण गर्‍यो, घडीको साथ पूर्ण गरीयो जसले नवीकरणको लागि आवेदन दिन विन्डो अघि बाँकी मिनेटहरूको संख्या ट्र्याक गर्‍यो। हाम्रो टेक टोलीले informationण अनुरोध प्रशोधन गर्न बिल्कुलै आवश्यक नभएको कुनै पनि जानकारी बाहिर हटाएर हाम्रो अवस्थित applicationण आवेदन सुव्यवस्थित, र छिटो समीक्षा र यस समयमा नवीकरण गर्न एक आवेदकको योग्यता पुष्टि गर्न प्रणाली निर्माण।
त्यो पहिलो हप्ताको अन्तसम्ममा, हामी वीing्गार्ट फाउन्डेशन, जेम्स इर्विन फाउन्डेशन, चाभेज परिवार फाउन्डेशन, र टिपिंग पोइन्ट समुदायबाट एक मिलियन डलर प्राप्त गर्न चाहन्छौं। तिनीहरूको समर्थनको साथ, हामीले सो अनुरूप हाम्रो मौलिक लक्ष्यलाई दोब्बर बनायौं र २,००० डीएसीए प्राप्तकर्ताहरूलाई नविकरणका लागि आवेदन दिन मद्दत गर्ने लक्ष्य लियौं। यो एक बेतुका महत्वाकांक्षी र जोखिमपूर्ण लक्ष्य थियो, जसले एक MAF को वित्तीय सम्भावित नगदी प्रवाहको संकटमा राख्न सक्छ। तर हामीले यो गर्नुपर्‍यो। यदि त्यहाँ कहिले पनि यो सबै लाइनमा राख्ने समय थियो, यो अहिले थियो।
DACA समाप्त गर्ने घोषणाको एक हप्ता पछि, हामी नयाँ loanण कोष सुरू गर्न तयार थियौं। हामीसँग अन्तिम दिनसम्म २१ दिन थियो।
म September्गलबार, सेप्टेम्बर १२ को बिहान, हामीले मिडिया आउटलेटहरू, सहकर्मीहरू, फन्डरहरू र आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूलाई ईमेल र प्रेस विज्ञप्तिको एक श्रृंखला पठायौं। त्यस दिन म न्यु जर्सीमा थिएँ, त्यस बेलुका मुख्य भाषण दिन तयारी गर्दै थिएँ, जब मलाई वेनगार्ट फाउन्डेशनका चीफ एक्जिक्युटिव अफिसर फ्रेड अलीको फोन आयो, जसले हामीलाई loansणको सट्टा अनुदान दिनेबारे विचार गर्न आग्रह गर्यो। उनले तर्क दिए कि परिस्थितिको जरुरीता र गुरुत्वाकर्षणले अनुदान आवश्यक छ र loansणले शून्य ब्याजमा पनि केही सपना देख्ने व्यक्तिलाई बाधा पुर्‍याउँछ। म अभियान सुरु गरेपछि बदल्न सही हिचकिचाउँदिन, तर हामीसँग काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता सुनेपछि डुब्न सजिलो भयो। फ्रेडलाई धन्यबाद, अगाडि नयाँ बाटो हाम्रो लागि खोलियो।
मैले द्रुत रूपमा एमएएफको नेतृत्व टोली बोलाएँ र हामी हाम्रो रणनीतिमा संशोधन गर्न सहमत भयौं। हामीले त्यस दिन पछि अभियान पुनः सुरु गर्‍यौं DACA प्राप्तकर्ताहरूलाई $495 छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै जसले नवीकरण गर्नु आवश्यक थियो। बिहीबार, सेप्टेम्बर १, सम्म, अभियान शुरू गरेको दुई दिन पछि, हामीले २,००० भन्दा बढी अनुप्रयोगहरू प्राप्त गर्यौं। अभियानको वेबसाइट छोटो छोटो दुर्घटनाको कारण क्र्यास भयो। हामी प्रतिक्रियामा उत्साहित थियौं, तर अत्यधिक चासोले थुप्रै नयाँ परिचालन चुनौतीहरू सिर्जना गर्‍यो। पहिलो, त्यहाँ धेरै वास्तविक सम्भावना थियो कि हामी पैसा खर्च गर्छौं। समस्याको अंश समय थियो। जबकि हामीले फन्डरहरूबाट प्रतिबद्धता लिएका थियौं, हामीले हाम्रो बैंक खातामा पैसा प्राप्त गरेका थिएनौं। हामीले एमएएफको सामान्य अपरेटि money पैसाको अगाडि सामना गर्नुपर्‍यो जबकि फन्डरहरूले उनीहरूको स्वीकृति र वितरण प्रक्रियाहरूको माध्यमबाट काम गरे।
अभियानमा 48 48 घण्टा मात्र, पहिलो २,००० आवेदकहरूले DACA अनुदान कोषमा सबै १ टीटीपी २११,००,००० को दावा गरिसकेका थिए।
मलाई मेरो नेतृत्वको टोलीसँग कुराकानी सम्झना छ कसरी सम्पूर्ण अभियानको नर्भ रेकिंग को रूपमा अगाडि बढ्ने। हामी शाब्दिक रूपमा घडी हेरीरहेका थियौं, घण्टा गणना गर्दै जब हामी पैसा गुमाउँदैनौं। त्यो रात, हामीले कार्यक्रम बन्द गर्ने विचार ग .्यौं। धेरै छिटो, हामी २,००० सपना देख्ने मानिसहरूलाई हाम्रो लक्ष्य भेट्दछौं, जुन हामीले सुरुमा योजना गरेको भन्दा दोब्बर नै भइसकेको थियो। तर सत्य यो थियो कि हामी रोक्न सकेनौं। अन्त्य DACA एक राष्ट्रीय आपतकालिन थियो, र हामीले यसको बीचमा आफ्नो समुदाय त्याग्न अस्वीकार गर्यौं।
हामीले शून्य ब्याज loansणमा फर्कने विचार ग .्यौं। तर हामी त्यो पनि गर्न चाहँदैनौं। यो अत्यन्तै जटिल र भ्रामक हुने थियो। यसको सट्टा, हामीले हाम्रो मेसेजिaging परिवर्तन गर्‍यौं केही चाप कम गर्नका लागि। हामीले आवेदकहरूलाई साथीहरू वा परिवारका सदस्यहरूको समर्थनको लागि एमएएफबाट पैसा अनुरोध गर्नु अघि उनीहरूको सहयोगको लागि विचार गर्न प्रोत्साहित गर्न थाल्यौं। हामीलाई विश्वास छ कि प्रक्रियाबाट स्वत: छनौट गर्न सक्नेहरूले त्यसो गर्ने छन्, फलस्वरूप माग घटाउने र हामी अधिकतम खाँचोमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने सम्भावना बढाउने। हामी यस कुरामा सहमत भयौं कि म अधिक रकम प्राप्त गर्नको लागि फोनहरू काम गर्छु।
मोहनले सयौं चेक प्रिन्ट गर्दै
"स्थिति कोठा" कार्यमा
दीना, एक विशेष एड शिक्षक, उनको चेक उठाउँछिन्
अन्तमा, अभियानको क्रममा हामीले $4 मिलियन डलर उठायौं, जुन हाम्रो प्रारम्भिक लक्ष्य भन्दा आठ गुणा बढी छ। जबकि म यो भन्न चाहान्छु कि पैसा मेरो असाधारण कोष जुटाउने सीपहरूको प्रतिक्रिया हो, त्यो त्यस्तो थिएन।
फन्डरहरूले अवस्थाको महत्त्व बुझे, र तिनीहरू मध्ये धेरैले आफ्नो अनुमोदन प्रक्रियाहरू - जुन सामान्यतया महिनाहरू लिन्छ - केवल घण्टा वा दिनहरूमा द्रुत गर्न सक्षम थिए। फ्रेड अली फोन पनि काम गरिरहेको थियो; उनले अन्य फाउण्डेशनमा आफ्ना सहकर्मीहरूलाई सम्पर्क गरे, हाम्रो पक्षमा बोले र उनीहरूले अभियानलाई समर्थन गर्ने विचार गरिरहे। र फ्रेड जस्तै, हामीसंग अरू धेरै फन्डरहरू पर्दा पछाडि काम गरिरहेका थिए, सहयोगीहरू र सहयोगीहरूलाई उनीहरूले चिन्ता गर्थे र चाँडै प्रतिबद्ध गर्न सक्थे। तिनीहरू मध्ये धेरैले नविकरण कोषमा योगदान दिए, goal,००० सपना देखीरहेकहरूले आफ्नो DACA स्थिति नवीकरण गर्न हाम्रो लक्ष्यलाई बढाए। कोष र नगद प्रवाह चुनौति बाहेक, हामी अब धेरै प्रमुख परिचालनको एक सामना गर्दै थिए।
सिद्धान्तमा, आवेदकहरूलाई रकम दिने प्रक्रिया सरल थियो। एमएएफले १ टी २ टी T 95 for for को लागि होमल्याण्ड सुरक्षा विभागमा एक चेक लेख्दछ, र यसलाई आवेदकलाई मेल गर्दछ, जसले यसलाई तिनीहरूको आवेदन प्याकेजमा समावेश गर्दछ। तर अभ्यासमा, हामी भित्ता पछाडि भित्तामा हिर्कायौं। शुरुवातकर्ताहरूको लागि, त्यहाँ यति धेरै चेक कसरी काट्ने भनेर प्रश्न आएको थियो। अभियानको प्रारम्भिक दिनहरूमा, जब हामी दिनको of०० भन्दा माथि आवेदनहरू प्राप्त गर्दै थियौं, म कामको लागि जाँदै थिएँ र हाम्रो प्रमुख अपरेटिंग अफिसर चिलीमा थिए। किनकि हामी दुई व्यक्ति मात्रै MAF जाँचमा हस्ताक्षर गर्न अधिकृत छौं, यसले तत्काल बाधा उत्पन्न गर्‍यो।
हाम्रो पहिलो workaround एक हस्ताक्षर टिकट थियो। अनुसन्धान तथा टेक्नोलोजी निर्देशक अपर्णा अनन्तासुब्रमण्यमले पुष्टि गरे कि हाम्रो बैंकले स्ट्याम्प चिन्न सक्दछ, मलाई केही दिनको साथ विचारमा जहाजमा लग्यो, तर त्यो एकदमै ढिलो पनि थियो।
अनुप्रयोगहरू प्रत्येक दिन सयौं द्वारा आउँदै; र हाम्रो लक्ष्य ,000००० देखि ,000००० सम्म जान्छ, र अन्तमा ,000,००० नवीकरणहरूमा, हामीले एक राम्रो विकल्प खोज्न आवश्यक पर्‍यो।
केही दिन भित्र, हामीले कार्यको थोक पार्टी प्रबन्धन गर्न तेस्रो-पक्ष प्रोसेसरमा कार्यलाई आउटसोर्स गर्‍यौं, अनुमोदन प्रक्रिया र अनुप्रयोगहरूको लागि ध्यान दिनुहोस् जुन व्यक्तिगत ध्यान आवश्यक पर्दछ। यो हाम्रो काँधबाट बाहिर एक विशाल वजन थियो। चेक काट्नेसँगै, तिनीहरूलाई मेल पठाउनेले सोझो देखिन्थ्यो तर अत्यन्त गाह्रो साबित भयो। यस अभियान भन्दा पहिले, एमएएफले प्रायः स्नेल मेल मार्फत ग्राहकसँग कहिले पनि कुराकानी गरेको थिएन। फलस्वरूप, हामीसँग ठूलो मात्रामा मेलहरू पठाउन धेरै अनुभव छैन, र यो महसुस भएन कि यो एक कला र विज्ञान दुबै हो, जब सम्म लगभग ढिलो भएन।
हाम्रो मूल योजना चेकलाई प्राथमिकता मेल मार्फत पठाउनु थियो। यो गर्न हामीलाई उपयुक्त "प्राथमिकता मेल" खामहरू आवश्यक पर्दछ, जुन प्रत्येक हुलाक कार्यालयमा खरीदका लागि उपलब्ध छन्। त्यसो भए, त्यो पहिलो दिन, कार्यक्रमहरू र स .्लग्नताका निर्देशक मोहन कानुनगो आपूर्ति खरीद गर्न नजिकको डाकघर गए। जहाँसम्म, हामी मेल गर्न आवश्यक सयौं चेक को लागी पर्याप्त खामहरु थिए। त्यसोभए, ऊ अर्कैमा गयो। र अर्को अर्को।
चाँडै, एमएएफ स्टाफ र उनीहरूका प्रियजनहरूले खाडी क्षेत्रभरि डाकघर आपूर्तिका लागि छाड्न लागेका थिए। एक बिन्दुमा, मोहनले $2,400 मूल्यको मेलिंग आपूर्तिका लागि आफ्नो व्यक्तिगत क्रेडिट कार्डमा शुल्क लिए।
उसले कम्पनी कार्ड प्रयोग गर्न सकेन किनकि उसले यो अन्य सँधै एमएएफ स्टाफलाई दिएका थिए जसले यसलाई अन्य हुलाक कार्यालयहरूमा आपूर्ति किन्न प्रयोग गरिरहेका थिए। किनकि हामी बल्क मेलिंगका लागि नयाँ थियौं, हामीलाई थाहा थिएन कि त्यहाँ खास तरीकाले तपाईंले गर्नु पर्ने हुन्छ। एमएएफ कर्मचारीहरूले ठूलो खालका खालका बक्सहरू देखाए, हामी उनीहरूलाई हामी जस्तो पत्र पठाउँदछौं त्यसरी नै हामी कुनै अन्य पत्र पठाउने थियौं। बाहिर जान्छ कि हाम्रो विधि अत्यन्त अक्षम थियो किनकि हुलाक कार्यालयसँग बल्कमा खामहरू प्रशोधन गर्न कुनै तरिका थिएन। बरु, प्रत्येक एकल व्यक्तिगत रुपमा प्रक्रिया गर्नु पर्ने थियो, जसमा करीव १ - २ मिनेट लाग्यो, सयौं लिफाफामा सयौं घण्टा लिन सक्दछ।
यस बारे कोही पनि खुशी थिएनन्। हुलाक मजदुरहरू ठूलो असुविधाले गर्दा उनीहरू त्रसित थिए किनभने उनीहरूलाई पनि ज्यादै कम भार दियो। हामी आफैं पनि दु: खी थियौं। एमएएफ कर्मचारी एक घण्टा हुलाक कार्यालयमा एक घण्टा सम्म रहनुपर्‍यो, जबकि प्रत्येक पत्र प्रक्रियामा थियो। यो समय हामीसँग थिएन। चाँडै हुलाक कार्यकर्ताहरूले केवल हाम्रो पत्राचार प्रक्रिया गर्न इन्कार गर्न थाले। स्टाफ एक हुलाक कार्यालय मा अस्वीकार हुनेछ र अर्को ड्राइभ को आशा मा तिनीहरूले त्यहाँ बाट मेल गर्न सक्छ। वा तिनीहरू ठूला मेलि smallerहरू सानो जोडीमा विभाजित गर्दछ जुन प्रक्रियामा कम कठिन हुन्छ र तिनीहरूलाई त्यसरी बाहिर निकाल्दछ।
मुख्य विकास अधिकारी, तारा रोबिन्सनले संयुक्त राज्य हुलाक सेवाको क्षेत्रीय प्रतिनिधि को स्थानीय कार्यालय बोलाए, जहाँ उनले व्यापार सेवा नेटवर्क विभागमा एक महिला संग कुरा गरे। ताराले उनलाई सोधिन्, "के तपाईलाई सपनाकारहरूको बारेमा थाहा छ?" उनले भनिन्, "हो!" एमएएफ के गर्दै थियो र त्यहाँ किन त्यस्तो समयको कमी आएको थियो भनेर बुझाइसके पछि हुलाक मजदुर काममा उत्रिए। हामीले हाम्रो वकिल खोज्यौं। सोही दिन, उनले धेरै क्षेत्र डाकघरका सुपरवाइजरहरूसँग एक सम्मेलन कल आयोजना गर्‍यो जसमा उनले उनीहरूलाई एमएएफको सबै पत्राचार स्वीकार्न निर्देशन दिए। हाम्रो पोष्टल शेरोले कसरी मेलमा म्यानिफेस्ट सिर्जना गर्ने भनेर वर्णन गर्दछ ताकि हुलाककर्मीहरूले हाम्रा सबै खामहरू व्यक्तिगत रूपमा होइन बल्कमा स्क्यान गर्न सक्दछन्। उनले पोस्टमास्टर जनरलको प्रत्यक्ष नाम र नम्बर पनि प्रदान गरे यदि हामी बढि समस्यामा दौड्यौं भने।
हाम्रो चिन्ताको विषयवस्तु यो हो कि हामीले आवेदकहरूलाई प्रारम्भिक आवेदन पेश गरेको 48 48 घण्टा भित्र प्रतिक्रिया दिने वचन दिएका थियौं।
प्रारम्भमा, हामीले सोच्यौं कि hours 48 घण्टा अपेक्षाकृत द्रुत रूपान्तरण समय हो। तर स of्कटको समयमा, hours 48 घण्टा सधैंका लागि महसुस हुन सक्छ। हाम्रो कार्यालय निरन्तर कलहरू, ईमेलहरू, फेसबुक सन्देशहरू, र व्यक्तिगत भेटघाटहरूमा बाढी आएको थियो, आवेदकहरूबाट हामीले उनीहरूको अनुरोध प्राप्त गरिसक्यौं भनेर पुष्टि गर्न चाहन्थ्यौं र चेक कहिले आशा गर्ने भनेर जान्न चाहन्थ्यौं।
स्टाफमा प्रत्येक एकल व्यक्ति फोन र फिल्डिंग प्रश्नहरूको जवाफ दिइरहेको थियो - म सहित। हामीले प्राप्त गरेको सोधपुछको मात्रा फिल्ड गर्न हामी अत्यन्तै दयनीय थियौं, र निर्णय गर्यौं कि हामीलाई हाम्रो आवेदकहरूसँग बढी पारदर्शी र बलियो संचारको आवश्यकता छ। अपर्णाले ईमेलहरूको एक श्रृंखला ड्राफ्ट गर्‍यो जुन स्वचालित रूपमा आवेदकहरूलाई पठाइने थियो किनकी उनीहरूको आवेदनले हाम्रो प्रक्रिया मार्फत काम गर्दछ। एउटा ईमेल अनुप्रयोगको रसीद पुष्टि गर्न पठाइएको थियो; अर्कोलाई यो पुष्टि गर्न पठाइएको थियो कि हामीसँग समीक्षाको लागि सबै आवश्यक सामग्रीहरू थिए; यो तेस्रोमा यो पुष्टि भयो कि यो अनुमोदित भयो; र अन्तिम ईमेल जाँच पठाइएको थियो जाँचको आशा जब गर्न। हामीले आवेदकहरूलाई ट्र्याकि information जानकारीको साथ छिट्टै अर्को ईमेलको अपेक्षा गर्न पनि अर्को स्वचालित ईमेल सिर्जना गर्‍यौं। यो माथि देखिन्छ, तर यी ईमेल संचारले कल भोल्युमलाई कम गर्‍यो।
जबकि स्वचालित संचारले हामीले प्राप्त गरेका कलहरू र ईमेलहरूको भोल्युमलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न मद्दत गर्‍यो, तर हामी कामको बोझको सापेक्षमा गम्भीर रूपमा कम महत्त्वका छौं। हामीले अस्थायी स्टाफ राख्यौं तर द्रुत रूपमा हामीले महसुस गर्यौं कि अत्यधिक संवेदनशील जानकारीको प्रकृयाको कारणले काम गरिरहेका छैनौं। त्यसकारण, हामी आफ्ना मित्रहरू र सहकर्मीहरूतर्फ लाग्यौं, जसमा ला कोकिना, र सेल्सफोर्स र टिपिंग पोइन्टमा अन्य प्रमुख सहयोगीहरू थिए, तिनीहरू सबैले कामबाट वञ्चित गरे र उनीहरूलाई स्वयंसेवाको लागि हाम्रो कार्यालयमा पठाए।
त्यसपछि वाशि Washington्टनका गभर्नरको कार्यालयले हामीलाई सम्पर्क गर्‍यो र भन्यो, “हामीले तपाईलाई DACA छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने राष्ट्रव्यापी प्रदायक भन्यौं। वाशिंगटन राज्यमा हामीसँग एक अज्ञात दाता छन्। के तपाईं हाम्रा निवासीहरूको लागि $125,000 छात्रवृत्ति प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ? ”
साना र ठूला दुबै सयौं संगठनले हामीलाई शब्द फैलाउन मद्दत गर्‍यो। त्यहाँ भिडियोहरू, मेम्स, भ्लगरहरू र एक सामाजिक मिडिया स्वीपस्ट्याक होशियारी केटीहरू सहयोगी द्वारा प्रायोजित। क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका राष्ट्रपतिले क्यालिफोर्निया समुदाय महाविद्यालयका अध्यक्षले जस्तै विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिबारे जानकारी दिन धेरै प्रेस विज्ञप्ति र सोशल मीडिया सन्देशहरू पठाए। हाम्रो टोलीले कुनै सोचाइ नराखी केही फन्डरहरू उनीहरूले कसरी पहललाई समर्थन गर्न सक्छन् भनेर सोधे। देशभरि, आप्रवासी अधिकार समूहहरू र कानूनी सहायता संगठनहरू जुन हामीले पहिले कहिल्यै काम गरेका थिएनौं उनीहरूको ग्राहकहरूको लागि हाम्रो नविकरण कोषको विज्ञापन गरिरहेका।
बे क्षेत्र बाहिर शब्द फैलाउन महत्त्वपूर्ण थियो किनभने ती धेरैजसो स communities्गठनहरू त्यस्ता समुदायहरूमा सञ्चालन गरिरहेका थिए जुन Dreamers को समर्थन थिएन, या त स्थानीय राजनीतिक वातावरणको कारण वा तिनीहरू मिसिसिपी र यूटा जस्ता ग्रामीण, पृथक क्षेत्रमा थिए। हामी यी समुदायहरूमा पुग्न हाम्रो धेरै क्षमतालाई मिडिया र सामाजिक मिडिया दुबैबाट अविश्वसनीय प्रतिक्रियाहरूमा श्रेय दिन्छौं। अभियानले १,००,००० भन्दा बढी सोशल मिडिया हिटहरू प्राप्त गरेको छ, र १०० भन्दा बढी मिडिया उल्लेखहरू, सहितमा कभरेज न्यू योर्क टाइम्स, एनपीआर, र वाशिंगटन पोष्ट, अन्य प्रमुख आउटलेटहरूमा।
हामी $3.8M 7, 1 D8 सपना देख्नेहरुलाई नम्र बनायौं - यो देशको सबैभन्दा ठूलो DACA नवीकरण कोष हो।
२०१ 2017 को गिरावटमा, एमएएफले TP 46 राज्यहरूमा ,,०7878 डीएसीए नविकरण आवेदन फन्ड गर्न १ टीटीपी २ टी २,5१13,6१० प्रदान गर्‍यो - जुन सबै नविकरण आवेदनहरू सबमिट गरिएको 6..7 प्रतिशत हो। यसको मतलब हामीले क्यालिफोर्निया राज्यमा हरेक दश Dreamers मध्ये एउटालाई रकम प्रदान गर्‍यौं जसले नवी क्षेत्रका लागि आवेदन दिएका थिए, जसमा खाडी क्षेत्रका सबै आवेदकहरूको १ percent प्रतिशत समावेश छ। र जनवरी २०१ 2018 पछि, दिनहरू पछि अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश विलियम Alsup को निषेध, MAF सपना देख्नेहरुलाई थप २,6०० अनुदान जारी गर्‍यो।
एक बे एरिया कानूनी सहायता अधिवक्ताले मलाई भनेझैं, "बारम्बार, सपना देख्नेहरू एमएएफ चेक हातमा लिएर नविकरणका लागि आवेदन दिन हाम्रो अफिसमा गए।"
विगत धेरै महिनाहरुमा, हामी सबै एमएएफ मा अभियान को प्रतिबिम्बित धेरै समय खर्च गरेको छ, के काम गरीरहेको थियो, के थिएन, र अनुभव कसरी हाम्रो काम अगाडि बढ्ने आकार मा सोच्दै। अभियान बिटर्सवीट विजय हो। प्रभावको सर्तमा, हामीले हाम्रो भित्री महत्वाकांक्षालाई पार गर्‍यौं। हामी आप्रवासीहरूका लागि प्रेम र समर्थनको एक प्रकाशको रूपमा खडा भयौं जब हाम्रो धेरै साथीहरू, परिवारहरू, र ग्राहकहरू आक्रमणको सिकार भए। जे होस्, एक संगठनको रूपमा हामीले अभियानलाई मनाउन संघर्ष गरेका छौं किनकि यसले DACA को अन्त्य प्रतिनिधित्व गर्दछ। हामी यस्तो अमेरिकामा विश्वास गर्छौं जुन यस भन्दा धेरै राम्रो छ र छक्क परेको छ र बिल्कुलै विचलित छ कि ट्रम्प प्रशासनले स्थायी विधायी समाधानको प्रस्ताव नगरी DACA समाप्त गर्‍यो, जसले लाखौं युवा आप्रवासी र उनीहरूको परिवारलाई कष्टमा पारे। त्यस प्रकारको पीडाको साथ बाँच्न गाह्रो छ। ट्रम्प प्रशासनका कार्यहरूको जवाफमा हामीले महसुस गरेका सबै उदासिनता र घृणाको लागि हामीले एउटा गहिरो र बढी शक्तिशाली संकल्प पनि फेला पारेका छौं। जबकि मलाई थाहा छ प्रत्येक MAFista अनुभवबाट व्यक्तिगत केहि हटाईएको छ, हामी यी व्यापक पाठ साझा:
१. समय भनेको सबै कुरा हो।
प्रमाणित समाधानहरू - जतिसुकै ठूलो भए पनि - प्रत्येक परिस्थितिको लागि सधैं * सही * समाधान हुँदैन। हामीले हाम्रो कोष loansणको साथ सुरु गरेका थियौं किनभने makingण बनाउनु भनेको हामी के गर्छौं, र हामी यसलाई राम्रो गर्छौं। तर DACA स of्कटको जरुरीतालाई ध्यानमा राखी - जब हामीसँग अन्डरराइटिंग प्रक्रियाको एकदमै मामूली प्रक्रियासँग पनि समय थिएन - loansणहरू सही उत्पादन थिएनन्। सुरुमा हामी हाम्रो ईतिहासमा यति धेरै खस्केका थियौं कि हामीले loansण भन्दा बाहिर देख्न सक्दैनौं। यसले छात्रवृत्ति सम्भावनाको ढोका खोल्न बाहिरी मानिस लिन थाल्यो। यद्यपि एक पटक त्यो ढोका खुल्दा, हामी लचिलो थियौं, वैकल्पिक दृष्टिकोणलाई अँगाल्न तयार भयौं र यसलाई छिटो सञ्चालनमा लियौं।
२. टेक्नोलोजी मापन गर्न महत्वपूर्ण छ।
समय र समय हाम्रो अभियान भर, हामी अवरोध र टेक्नोलोजी संग स्केल सेवाहरू समाधान। हामीले हाम्रो सेल्सफोर्स सीआरएम मार्फत एक सुरक्षित अनलाइन आवेदन सिर्जना गरेर देशभरि आवेदकहरू संलग्न गरायौं जुन व्यक्तिले केही मिनेटमा हामीलाई पूरा गर्न सक्नेछन। हामीले Dreamers लाई सूचित राख्नका लागि स्वचालित ईमेलहरू सिर्जना गर्‍यौं र आवेदन प्रक्रियामा व्यस्त रह्यौं। हामीले ग्राहकहरूलाई चेक काट्ने प्रक्रिया आउटसोर्सिंग गर्‍यौं इलेक्ट्रॉनिक आवेदक डाटाबेस बनाएर जुन हामीले हाम्रो तेस्रो-पक्ष प्रोसेसरमा ईमेल गर्‍यो। बिना प्रश्न, अनुपस्थित टेक्नोलोजी, हामी वास्तविक समयमा अवरोधहरूको समस्या निवारण गर्न सक्दैनौं, र हामी बे क्षेत्रबाट बाहिरका समुदायहरूमा पुग्नको लागि हाम्रो क्षमतामा धेरै अवरोध हुने थियो।
Trust. विश्वास सफलताको लागि आवश्यक छ।
सपना देख्ने व्यक्तिहरू उनीहरूको व्यक्तिगत जानकारी एमएएफसँग बाँड्न इच्छुक थिए - डरको वातावरणको बावजुद जुन उनीहरू सञ्चालन गरिरहेका थिए - किनभने उनीहरूलाई थाँहा थियो कि हामी हौं - र हामी उनीहरूको पक्षमा छौं। त्यस्तै गरी, फन्डरहरू, जसमा पहिले हामीसँग कहिल्यै काम नगरेका व्यक्तिहरू हामीमाथि ठूलो बाजी दिन इच्छुक थिए किनकि तिनीहरूले हाम्रो पक्षमा बोलेका आफ्ना सहयोगीहरूलाई विश्वास गरेका थिए। त्यस्तै, गैर-नाफामुखी संस्थाहरूले उनीहरूका ग्राहकहरूको लागि हामीलाई स knowing्केत गरे कि हामी उनीहरूद्वारा सहि छौं। यो सबै द्रुत भएको थियो र विश्वास अभियान सफल बनाउनको लागि महत्वपूर्ण थियो।
U. अनिश्चितता तपाईंको साथी हुन सक्छ।
नाफारहित संस्थाको रूपमा, हामी वर्षौंको दौडान हाम्रो कामको योजना गर्छौं। हामी परिवर्तनको रणनीतिहरू, रणनीतिक योजनाहरू, र बजेटहरू सिर्जना गर्दछौं हाम्रो राम्रो भण्डारीत्व र वित्तीय व्यवस्थापन प्रदर्शन गर्न। सामान्य समयमा, यी प्रयास गरिएका र सही अभ्यासहरूले लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नेतर्फको हाम्रो प्रगतिलाई चिन्हित गर्न मद्दत गर्छन्। मैले बुझें। तर हामी सामान्य समयमा छैनौं। यस्ता क्षणहरूमा, हाम्रो योजनाहरू कत्तिको परिपक्व छन्, तथ्य यो हो कि लाखौं परिवारको भाग्य ट्रम्पको अर्को इन्सेन्डियरी ट्वीटसँग सन्तुलनमा छ। हामीलाई वास्तवमै अर्को ट्रम्पले सिर्जना गरेको संकटको प्रकृति वा हदसम्म थाहा छैन। यस प्रकारको अनिश्चितताले परिवर्तनशील राजनीतिक मौसमलाई ध्यानमा राख्ने इच्छा र क्षमताको आवश्यकता छ, र तदनुसार कार्यक्रम रणनीतिहरू परिवर्तन गर्दछ।
सामाजिक न्याय को लागी लडाई लामो छ। हामीसँग कम्तिमा 7,6०० बढी मानिस युद्धमा सामेल हुन तयार छन्।
प्रेस विज्ञप्ति: २,००० सपना देखी DACA नवीकरण छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न
José Quiñonez मा सेप्टेम्बर 13, 2017 द्वारा लिखित। १ टिप्पणी
तत्काल रिलीजको लागि
(8 888) २44-8080०8 x206
$1,000,000 कोष अक्टुबर by सम्ममा सपना देख्नेहरूलाई नवीकरण गर्ने DACA लाई मद्दत गर्ने घोषणा गरियो
सैन फ्रांसिस्को, CA - सेप्टेम्बर १,, २०१। - १ टीटी T टी (एमएएफ) ले आज घोषणा गर्‍यो कि यसले अक्टुबर5को म्याद भित्र DACA नविकरणका लागि भुक्तान गर्न २,०००+ सपना देख्नेहरुलाई $1,000,000 छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ।
गत हप्ता, ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरे कि डिफर्ड एक्शन फर चाइल्डहुड एराइभल्स (डीएसीए) कार्यक्रम समाप्त हुँदैछ। DACA ले सुरक्षा, सुरक्षा, र ,000००,००० युवाहरूका लागि आजीविका प्रदान गरेको छ जुन सामान्यतया "सपना देख्नेहरू" भनेर चिनिन्छ। १ six4,००० सपना देख्नेहरु मध्ये their महिनामा कार्यक्रम समाप्त हुनु अघि आफ्नो DACA परमिट नवीकरण गर्न योग्य छन्, धेरैले आफैंले आफैंले खर्च गर्न सक्नेछन। ती Dreamers को लागि जुन नविकरणका लागि योग्य छन् तर $495 आवेदन शुल्क वहन गर्न सक्दैनन्, MAF अब एक राष्ट्रव्यापी रूपमा उपलब्ध समाधानको साथ अगाडि बढिरहेको छ: Dreamers लाई उनीहरूको DACA स्थिति नवीकरण गर्न मद्दतको लागि छात्रवृत्ति (LC4DACA.org).
अहिले र अक्टुबर5को म्याद बीच, एमएएफले २,००० सपना देख्नेहरूलाई १ डीटीपीटी T 95 of को छात्रवृत्ति प्रदान गर्दछ उनीहरूको DACA अनुमति नवीकरण गर्न। यी छात्रवृत्तिको लागि पूँजी DACA नविकरण कोषबाट आएको हो, परोपकारी समुदायको बढ्दो समर्थनको साथ यस हप्ता शुरू भयो।
"राष्ट्रपति ट्रम्पले डिएकाको अन्त्य भएको कुरा थाहा पाउँदा हामी छक्क र विचलित भएका थियौं," एमएएफका सीईओ र २०१ Mac म्याकआर्थर “जीनियस” फेलो जोसे क्वियोनेज भन्छन्। उनले थपे, "हामी कार्यमा फसेका छौं जब हामीले हजारौ सपना देख्ने अवसरको सानो झ्याल देख्यौं र उनीहरूको सुरक्षा स्थिति नवीकरण गर्न सक्दछौं। यी युवा मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने समय अहिल्यै हो। ”
देशभरि अब देखि मार्च between बीच मिति समाप्त हुने परमिमाको साथ DACA प्राप्तकर्ताहरू छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न योग्य छन्। कोषको १ टीटीपी २,500००,००० क्यालिफोर्निया राज्य विश्वविद्यालय र क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयमा कम्युनिटी कलेजहरू पढ्ने क्यालिफोर्नियाका विद्यार्थीहरूलाई विशेष लक्षित गरिएको छ। समय सार हो, यो अनलाइन छात्रवृत्ति एक दिन भित्र प्रशोधन गरिनेछ, सैन फ्रांसिस्को मा एक ही दिनको चेक संग र देशको अन्य भागहरुमा रातभर मेल द्वारा।
एमएएफको सपना देख्नेहरूसँग काम गर्ने लामो इतिहास छ र सयौंलाई डिएसीए आवेदन शुल्कको लागि ०१ टीटीपी १ ब्याज usingण प्रयोग गर्न भुक्तान गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ। २ initiative-— 24 घण्टा भित्र Dreamers लाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने यो पहल सफलताको यस ट्रयाक रेकर्डमा निर्माण गर्दछ। मिति समाप्त हुने परमिटका साथ DACA प्राप्तकर्ताहरूलाई भ्रमण गर्न प्रोत्साहित गरियो LC4DACA.org र तुरुन्तै लागू गर्नुहोस्।
यस कोषको परोपकारी समर्थकहरु: Weingart फाउंडेशन, जेम्स इर्विन फाउन्डेसन, चाभेज परिवार फाउंडेशन, र सैन फ्रांसिस्को फाउन्डेशन शामिल छ।
MAF को बारेमा
Mइस्शन सम्पत्ति कोष (MAF) सबैको लागि एक उचित वित्तीय बजार निर्माण गर्न एक मिशन मा एक 1०१c3 गैर नाफामुखी हो। देशभरि 7,००० भन्दा बढी व्यक्तिले क्रेडिट स्कोर वृद्धि गर्न, downण तिर्न, र एक घरमालिक, एक विद्यार्थी, वा एक अमेरिकी नागरिक बन्ने जस्ता महत्वपूर्ण लक्ष्यहरूको लागि बचत गर्न एमएएफको पुरस्कार-विजेता वित्तीय सेवाहरूको प्रयोग गर्दछ। MAF हालै ओभरको एक राष्ट्रिय नेटवर्क प्रबन्ध गर्दछ 50 Lending Circles प्रदायकहरू १ states राज्यहरु र वाशिंगटन, DC मा
धन असमानता र नयाँ अमेरिकीहरू
José Quiñonez मा मार्च 20, 2017 द्वारा लिखित।
जातीय सम्पत्ती खाली छ, र यो बढ्दै छ। तर आप्रवासीहरू यस विश्लेषणमा कहाँ फिट हुन्छन्?
यो पोष्ट पहिलो पटक देखा पर्‍यो एस्पेन संस्थानको ब्लग। एस्पेन संस्थानको जातीय सम्पत्ति ग्यापमा रहेको प्यानलको तयारीका लागि यसलाई एमएएफका सीईओ होसे ए क्विनोजले लेखेका थिए। असमानता र अवसरमा २०१ 2017 शिखर सम्मेलन.
आज अमेरिकामा सम्पत्ति असमानताको बारेमा हामीलाई के थाहा छः यो वास्तविक हो, यो विशाल छ, र यो बढिरहेको छ। ठोस नीति परिवर्तन बाहेक, यो २२8 बर्ष लाग्छ कालो घरपरिवारको लागि सेतो परिवारको सम्पत्ति समात्न, र Latin years वर्ष लेटिनको लागि पनि। यो महत्वपूर्ण छ किनकि धन सुरक्षा सुरक्षा जाल हो। त्यो कुशन बिना, धेरै परिवारहरू केवल एक जागिर गुमाउँछन्, बिरामी हुन्छन्, वा आर्थिक क्षतिबाट टाढा सम्बन्ध विच्छेद गर्दछन्।
यहाँ हामीलाई थाहा छ कि अर्को कुरा: लोकप्रिय धारणाको विपरित, जातीय समूहहरू बीच सम्पन्न असमानता आएन किनकि एक समूहका मानिसहरूले कडा मेहनत गरेनन्, वा पर्याप्त बचत गरेनन्, वा अन्यलाई भन्दा पर्याप्त लगानीका बारे सचेत निर्णय गरे।
यो कसरी भयो त? छोटो उत्तर: ईतिहास। शताब्दीऔं दासत्व र तीतो दशकौं कानुनी विभाजनले आधार बनायो। रंगका मानिस बिरूद्ध विभेदकारी कानून र नीतिहरूले चीजलाई नराम्रो बनायो। १4.4 को जीआई बिलउदाहरण को लागी, सेता परिवारहरुलाई घर किन्न, कलेजमा भाग लिन, र धन जम्मा गर्न सहयोग पुर्‍यायो र color्गका मानिसहरूलाई यो सम्पत्ति निर्माण अवसरबाट धेरै हदसम्म समावेश गरिएको थियो।
आजको जातीय सम्पत्ती विभाजन हाम्रो देशको संस्थागत नस्लवादको लामो इतिहासको आर्थिक विरासत हो।
समयको कारक हो, केहि तरिकाहरूमा यी खोजहरूमा आधारभूत। समाजशास्त्रीहरू, अर्थशास्त्रीहरू, र पत्रकारहरु सबै एकजुट गरी कसरी जातीय सम्पत्ती खालि सिर्जना गरियो र समयसँगै बढ्दो बनाइयो। तर जब नयाँ अमेरिकनहरूको सवालमा यो कुरा आउँदछ कि recent हालैका दशकहरूमा हामी मध्ये लाखौं मानिसहरू यस जातिमा सामेल भएका छन् - समय प्रायः जातीय सम्पन्नता सम्बन्धी वार्तालापमा झगडा हुन्छ।
आप्रवासीहरूका रचनात्मक अस्तित्व रणनीतिहरू र धनी सांस्कृतिक र सामाजिक स्रोतहरूले राम्रो नीति हस्तक्षेप सूचित गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
रिपोर्टहरूले सामान्यतया जातीय सम्पत्तीको भिन्नतालाई बुझाउँदछ, बुझिन्छ, विभिन्न जातीय समूहहरूको औसत धनलाई साथसाथै राख्छ र ती विभाजन गर्ने खाडललाई अवलोकन गर्दछ। उदाहरण को लागी२०१२ मा, औसत सेतो परिवारको कालो घरधनीको स्वामित्वमा रहेको प्रत्येक डलरको लागि १ टीटीपी २ टी १ wealth, र ल्याटिनक्स घरपरिवारको स्वामित्वमा रहेको प्रत्येक डलरको सम्पत्तिमा १ टीटीपी २ टी १० थियो। यो कथा महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ कुनै पनि इन्कार छैन। तर अमीग्रेसनमा अधिक ध्यान दिएर हामी सम्पत्ति असमानताको छानबिनबाट के सिक्न सक्छौं?
द्वारा एक रिपोर्ट प्यू अनुसन्धान केन्द्र २०१२ मा वयस्कहरूको जनसंख्यालाई तीन समूहमा विभाजन गरे: पहिलो पुस्ता (विदेशी जन्मजात), दोस्रो पुस्ता (कमसेकम एक आप्रवासी अभिभावकको साथ अमेरिकामा जन्मिएको), र तेस्रो-र अधिक पुस्ता (दुई अमेरिकी जन्म भएका आमा बुबा)।
स्पष्ट रूपमा विभिन्न जातीय समूहहरूको धेरै फरक अमेरिकी कथाहरू छन्।
ल्याटिनिक्स र एशियनहरूको विशाल बहुमत नयाँ अमेरिकीहरू हुन्। ल्याटिनका वयस्कहरूको percent० प्रतिशत र एशियाली वयस्कहरूको percent percent प्रतिशत या त पहिलो वा दोस्रो पुस्ताका अमेरिकीहरू हुन्। यसको विपरित, केवल ११ प्रतिशत सेतो र १ percent प्रतिशत कालो वयस्कहरू समान पीढीको समूहमा छन्।
तुलना गरेर, पछिल्ला समूहहरू धेरै लामो समयको लागि संयुक्त राज्यमा रहेका छन्। र अमेरिकामा उनीहरूको तुलनात्मक तुलनात्मक कार्यकाल दिई, तिनीहरूको डाटा सँगसँगै राख्नको लागि यो बुझ्दछ।
तर ल्याटिनको सम्पत्तिलाई तुलना गर्नुहोस् - जसमा आधाजसो पहिलो पुस्ताका अमेरिकीहरू हुन् - श्वेत परिवारहरूसँग, जसमध्ये 89 percent प्रतिशत धेरै पुस्तादेखि अमेरिकामा रहेका छन्, यसले उत्तर भन्दा बढी प्रश्न उठाउँछन्।
यसको सट्टा, हामी हाम्रो विश्लेषणमा उपद्रव र प्रस add्ग थप्न सक्दछौं पुस्तावादी समूहहरू बीच जातीय समूहहरू बीचको सम्पत्तीमा भिन्नता मापन गरेर; वा विभिन्न समूहका सदस्यहरूसँग तुलना गरेर जसले प्रमुख डेमोग्राफिक विशेषताहरू साझा गर्दछ; वा अझ राम्रो अझै, विशिष्ट समूहहरू बीच नीति हस्तक्षेपहरूको वित्तीय प्रभाव मापन गरेर।
उदाहरण को लागी, हामी युवा आप्रवासीहरु को आर्थिक परिक्षण को अनुसन्धान गर्न सक्नेछौं २०१२ मा डिफर्ड एक्शन फर चाइल्डहुड आगमन (DACA) प्राप्त गरे। के तिनीहरूले आफ्नो आयमा सुधार गरे, आफ्नो बचत निर्माण गरे, वा सराहनीय सम्पत्ति प्राप्त गरे, आफ्नो साथीहरूको तुलनामा?
हामी समयमै पछि जान सक्दछौं र आप्रवासीहरूको पुस्तालाई के भयो भनेर अन्वेषण गर्न सक्दछौं जुन अध्यागमन सुधार र नियन्त्रण ऐन १ 198 (6 (IRCA) अन्तर्गत माफी दिइएको थियो। छायाबाट उत्पन्न भएको तिनीहरूको सम्पत्ति र सम्पत्तीको अर्थ के हो? अनावश्यक रहेको व्यक्तिसँग तिनीहरूको सम्पत्ति कसरी तुलना हुन्छ?
यी प्रासंगिक तुलनाले हामीलाई ठाउँ दिन सक्दछ केवल व्यक्तिको जीवनबाट के हराइरहेको छ भनेर प्रमाणित गर्न, तर यसले के काम गर्दछ भनेर पत्ता लगाउन।
तिनीहरूको रचनात्मक अस्तित्व रणनीतिहरू र धनी सांस्कृतिक र सामाजिक संसाधनहरूले राम्रो नीति हस्तक्षेप र कार्यक्रम विकासहरू सूचित गर्न मद्दत गर्दछ। सम्पन्न असमानताको बारेमा हाम्रो कुराकानीमा नयाँ अमेरिकीहरूको कथा ल्याउँदा यी भिन्नताहरू र उनीहरूले विभिन्न समूहका लागि लिने छुट्टै प्रकारको बारेमा हाम्रो समझलाई गहन बनाउँदछ। जुन हामीले आज सामना गरिरहेको पूर्ण जातीय सम्पत्ति विभाजनलाई कम गर्नका लागि बोल्ड नीतिहरू र नवीन कार्यक्रमहरू विकास गर्न आवश्यक छ।
प्रतिलिपि अधिकार © २०२० १TP5T। सबै अधिकार सुरक्षित।